ဝေဖန်မှု -“ ပျက်စီးသွားသောကုန်ပစ္စည်းများ - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သတ်သောဘာသာတရားနှင့်ဆက်ဆံရေးတွင်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကြားတွင်ဖျော်ဖြေသူအဖြစ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှုကိုလက်ခံခြင်း” (Leonhardt, Willoughby, & Young-Petersen 2017) - သင်၏ ဦး နှောက်သည် Porn တွင်
၏ဝေဖန်မှု -“ ပျက်စီးသွားသောကုန်ပစ္စည်းများ - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သတ်သောဘာသာတရားနှင့်ဆက်ဆံရေးတွင်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကြားတွင်ဖျန်ဖြေသူအဖြစ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှုအမြင်” (Leonhardt, Willoughby, & Young-Petersen 2017)
Update ကို (ဇူလိုင်လ, 2017): တွဲဖက်စာရေးဆရာ Brian Willoughby သည် David Ley သည် Ley's Psychology Today blog post ၌သူ၏လေ့လာမှုကိုမည်သို့လှည့်စားဖော်ပြခဲ့ပုံနှင့်ဖော်ထုတ်ပုံကိုဖော်ထုတ်သည်။ဘာသာရေးပဋိပက္ခပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးများအတွက် Porn မကောင်းပါက": Black နဲ့ White ကအတွက်စဉ်းစား: စျယာနျဘာသာတရားကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများ၏အန္တရာယ်ဖြစ်စေကြောင်းအရေးဆိုမှုတစ်ခုတုံ့ပြန်မှု။
အဆိုပါ "ရိပ်မိ ညစ်ညမ်းစွဲ "meme, တစ်ဦးလေ့လာမှုအသစ်၌ဤအချိန် peer-ပြန်လည်သုံးသပ်စာပေကူးစက်ဆက်လက်:"ပျက်ဆီးနေသောကုန်စည်: ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုပတ်ဝန်းကျင်စျယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်ဆက်ဆံရေးတော့ပူပန်အကြားတွင်တစ်ဦးအာမခံအဖြစ်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲ၏အမြင်", 2017 (Leonhardt, et al။ ) ။ “ ရိပ်မိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှု” ဟူသောအသုံးအနှုန်းကို Joshua Grubbs မှရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်သူ၏ပထမဆုံးတွင်အသုံးပြုခဲ့သည် 2013 လေ့လာချက်။ လက်ရှိလေ့လာမှုတွင်“ ရိပ်မိသောညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု” သို့မဟုတ်“ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုအပေါ်ယုံကြည်မှု” ကိုအားပေးခြင်းသည်ယောရှုဂရော့ဘ်စ်၏အယူအဆကိုဆက်လက်မြှင့်တင်ခြင်းအပေါ်မူတည်သည်မှာထင်ရှားလှသည်။ Leonhardt, et al။3Grubbs တစ်ဖြတ်ပြီးဖလားကိုရယူခဲ့တာပါလေ့လာနေကိုးကား 36 ကြိမ် စက္ကူ၏ကိုယ်၌တည်၏။
ကျနော်တို့ကဆန်းစစ်ခင်မှာ Leonhardt, et al။ ၅ ပုဒ်ပါ“ ရိပ်မိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲမက်ခြင်း” မေးခွန်းလွှာသည် Grubbs လေ့လာမှုများကိုခေတ္တပြန်လည်လေ့လာကြည့်ကြစို့။ (YBOP ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဒီကျယ်ပြန့်ဝေဖန်မှု Grubbs ၏ "ရိပ်မိစွဲလမ်းမှု" လေ့လာမှုများနှင့်ဆက်စပ်သောအထင်အမြင်မှားစေသည့်စာနယ်ဇင်းများတွင်ဖော်ပြထားသောပြောဆိုချက်များ။ )
အပိုင်း ၁– Joshua Grubbs ၏နောက်ကွယ်ရှိအဖြစ်မှန်ရိပ်မိညစ်ညမ်းစွဲ"
အဖြစ်မှန်စစ်ဆေးမှု #1: Grubbs လေ့လာချက်က“ရိပ်မိညစ်ညမ်းစွဲ,"ဒါဟာအမှန်တကယ် Grubbs" Cyber ​​ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုစာရင်း "ပေါ်တွင်စုစုပေါင်းရမှတ်ကိုဆိုလိုသည် (CPUI-9) - အမှန်တကယ်စွဲခြင်းမှ“ ရိပ်မိခြင်း” ကိုခွဲခြား။ မရသော၊ အတည်ပြုခြင်းမရှိသောမေးခွန်းလွှာ။ ဒါအမှန်ပဲ, "ရိပ်မိညစ်ညမ်းစွဲ9-item ကိုညစ်ညမ်းအပေါ်စုစုပေါင်းရမှတ်: "နံပါတ်ထက်ပိုဘာမျှမညွှန်ပြ စှဲမွဲမှု မေးခွန်းလွှာ “ Cyber ​​Pornography Use Inventory ရမှတ်” ထက်ပိုမိုတိကျပြီးလှည့်ဖျားမှုကင်းသောတံဆိပ်အစားအထင်အမြင်လွဲစေသည့်ဖော်ပြချက်“ ရိပ်မိစွဲလမ်းမှု” ကိုမကြာခဏထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ခြင်းကြောင့်ဤအချက်ကို Grubbs လေ့လာမှုများတွင်ဘာသာပြန်ရာတွင်ပျောက်ဆုံးသွားသည်။
အဖြစ်မှန်စစ်ဆေးမှု #2: အဆိုပါ Grubbs CPUI-9 Assessment အမှန်တကယ် porn စွဲ, မ ယုံကြည်ချက် porn စွဲပါ။ ဒါဟာပစ္စည်းဥစ္စာစွဲစမ်းသပ်မှုသုံးပြီးတီထွင်ခဲ့သည်။ အဲဒါကိုငါတို့စကားလုံးမယူပါနဲ့ ဒီမှာ CPUI-9 ပါ။ (မေးခွန်းတစ်ခုစီကို Likert စကေး ၁ မှ ၇ အထိသုံးပြီး ၁ ယောက်က“ ။အကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူး, "နှင့်7ဖြစ်ခြင်း"အလွန်။ ")
ပိုမိုနီးကပ်စွာစစ်ဆေးပြီးသည့်အခါ CPUI-1 မှမေးခွန်း ၁-၆ သည်ဆေးစွဲခြင်းအားလုံး၏အရိပ်လက္ခဏာနှင့်လက္ခဏာများကိုအကဲဖြတ်သည်။ မေးခွန်း ၇-၉ (စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာဆင်းရဲဒုက္ခ) သည်အပြစ်ရှိသည်ဟုခံစားရခြင်း၊ အရှက်ကွဲခြင်းနှင့်နောင်တရခြင်းတို့ကိုအကဲဖြတ်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်, "အမှန်တကယ် စွဲ” သည်မေးခွန်းများ ၁-၆ (Compulsivity & Access Efforts) နှင့်နီးကပ်စွာဆက်စပ်သည်။ “ အရှက်ကွဲခြင်းနှင့်အပြစ်ရှိသည်ဟုအကဲဖြတ်သော” စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာဘေးဒုက္ခ (၃) ခုကိုဖယ်ရှားခြင်းသည် Grubbs လေ့လာမှုများအတွက်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောရလဒ်များရရှိစေသည်။ ၁) ဘာသာရေးနှင့်ဘာသာရေးအကြားပိုမိုအားနည်းသောဆက်ဆံရေး အမှန်တကယ် ညစ်ညမ်းဆေး ၂ ။[Porn] နာရီမှာတော့ကိုသုံးပါ"နှင့် အမှန်တကယ် ညစ်ညမ်းဆေး တစ်နည်းအားဖြင့်နာရီပေါင်းများစွာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုခြင်းသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုအလွယ်တကူကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်နိုင်ပြီးဘာသာရေးနှင့်ဘာသာရေးအရလိင်စွဲလမ်းမှုသည်အလွန်အားနည်းနေသည်။ ကျနော်တို့တူးဖော်မယ်ဆိုရင်ဘာသာတရားဟာဘာသာရေးနဲ့လုံးဝဆက်စပ်မှုမရှိပါဘူး core ကိုစွဲအပြုအမူတွေ မေးခွန်းများကို 4-6 အားဖြင့်အကဲဖြတ်အဖြစ်။
ရိုးရိုးလေးဆိုရလျှင် - အမှန်တကယ် porn စွဲစျယာနျဘာသာတရားကိုမှအနည်းငယ်သာဆက်စပ်မှုရှိပါတယ်။ ပန်းသီးနှင့်လိမ္မော်သီးများကိုအကဲဖြတ်သည့်ကိရိယာတစ်ခုတွင်ရောစပ်ရန်ခိုင်လုံသောနည်းစနစ်ဟုတ်၊ မဟုတ်ကိုတစ်ဖက်တွင်စွဲလမ်းမှုနှင့်အခြားတစ်ဖက်တွင်အရှက်ရသည့်အပြစ်နှင့်ဆက်စပ်မှုကိုရောနှောပေါင်းစပ်ခြင်းသည်ကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းတစ်ခုလောဟုလူတစ် ဦး ကကောင်းကောင်းမေးကောင်းမေးလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်အကဲဖြတ်ကိရိယာသည်ရိပ်မိစွဲလမ်းမှုမှစစ်မှန်ကြောင်းခွဲခြားနိုင်သည်ဟုမှားယွင်းစွာဆိုလိုသည့် descriptor (“ perceived”) ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်သင့်လျော်ခြင်းရှိမရှိကိုလည်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
အဖြစ်မှန်စစ်ဆေးမှု #3: CPUI ဆိုတာ Joshua Grubbs ရဲ့စကားလုံးကိုလည်းသင်ယူနိုင်သည် အမှန်တကယ် ညစ်ညမ်းစွဲမေးခွန်းလွှာ, တွင် Grubbs ၏ ၂၀၁၀ ခုနှစ်စာတမ်း သူကအကဲဖြတ်တစ်ဦးမေးခွန်းလွှာအဖြစ်ဆိုက်ဘာ-ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု Inventory (CPUI) အတည်ပြု အမှန်တကယ် porn စွဲ (ကြည့်ရှု ပိုပြီးအဘို့ဤအပိုင်းကို) ။ “ ရိပ်မိစွဲလမ်းမှု” နှင့်“ ရိပ်မိသောညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု” ဟူသောစကားစုကိုသူ၏ ၂၀၁၀ စာတမ်းတွင်မဖော်ပြထားပါ။ ဆန့်ကျင်ရန်, Grubbs et al ။ , 2010 ရှင်းလင်းစွာသော CPUI Assessment တော်တော်များများသောနေရာများအတွက်ဒီလိုဖော်ပြထား စစ်မှန်သော porn စွဲ:
CPUI ဒီဇိုင်းသည်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူအားအပြုအမူအားရပ်တန့်ရန်မစွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်း၊ အပြုအမူ၏ဆိုးကျိုးများနှင့်အမူအကျင့်အပေါ်ယေဘုယျစွဲလမ်းမှု (Delmonico & Miller, 2003) တို့ဖြင့်ဖော်ပြသည်။ CPUI ကိုကတိက ၀ တ်ကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှုကိုအကဲဖြတ်သည့်ကိရိယာတစ်ခုအဖြစ်ပြသခဲ့သည်။ ”
အဖြစ်မှန်စစ်ဆေးမှု #4: နောက်ပိုင်းတွင်တစ်ဦးအတွက် 2013 လေ့လာချက်, Grubbs လက်ရှိ 32 မှ 39 (သို့မဟုတ် 41 သို့မဟုတ် 9) မှ CPUI မေးခွန်းတွေအရေအတွက်ကိုလျှော့ချ, နှင့် (အံ့သြ) မိမိ Re-တံဆိပ်ကပ် အမှန်တကယ်, အတည်ပြု ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာစွဲစွဲလမ်းမှုကိုအကဲဖြတ်သည့်မေးခွန်းပုံစံအနေဖြင့်လိင်စွဲခြင်း Grubbs ကိုယ်တိုင်သူ၏စမ်းသပ်မှုသည်အမှန်တကယ်စွဲလမ်းမှုမှရရှိနိုင်သည်ဟုမပြောသော်လည်းသူ၏ CPUI-9 တူရိယာပေါ်ရှိရမှတ်များအတွက်သူ၏ထင်မြင်ယူဆချက် (“ ရိပ်မိစွဲလမ်းမှု”) ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အခြားသူများအားသူ၏တူရိယာတွင်စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည်ဟုထင်မြင်စေခဲ့သည်။ "ရိပ်မိ" နှင့် "အစစ်အမှန်" စွဲအကြားခွဲခြားရန်။ ၎င်းသည်ညစ်ညမ်းဆေးစွဲမှုအကဲဖြတ်ခြင်းနယ်ပယ်ကိုအကြီးအကျယ်ပျက်စီးစေခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အခြားသူများကမူသူမလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အထောက်အထားအဖြစ်သူ၏စာတမ်းများကိုအားထားနေရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ "ရူပါရုံ" ကို "ရိပ်မိ" စွဲလမ်းမှုနှင့်ခွဲခြားနိုင်သည့်စမ်းသပ်မှုမရှိပါ။ ထိုကဲ့သို့သောတံဆိပ်ကပ်ခြင်းသာ ပြုလုပ်၍ မရပါ။
Joshua Grubbs ကသူ၏ဒုတိယ CPUI-9 လေ့လာမှုကိုပြန်လည်သုံးသပ်သူနှင့်သူ၏ ၂၀၁၃ လေ့လာမှု၏တွဲဖက်စာရေးဆရာများသည် CPUI-2013 ၏“ စွဲလမ်းမှု” ဝေါဟာရများကိုပြောင်းလဲစေသည်ဟုအီးမေးလ်တစ်ခုတွင်ပြောကြားခဲ့သည်။ porn စွဲ) ။ ထို့ကြောင့် Grubbs သည်သူ၏စမ်းသပ်မှု၏ဖော်ပြချက်ကို“ ပြောင်းလဲ” ခဲ့သည်။ရိပ်မိ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာစွဲ "မေးခွန်းလွှာ။ အနှစ်သာရအားဖြင့်ဤဂျာနယ်တစ်ခုတွင်အမည်မဖော်လိုသူဝေဖန်သုံးသပ်သူ / အယ်ဒီတာတ ဦး က“ မထောက်ခံသည့်၊ရိပ်မိ အပြာစာပေစွဲလမ်းမှု အဆိုပါ CPUI တစ်ဦးအကဲဖြတ်စမ်းသပ် differential အဖြစ်အတည်ပြုဖူး အမှန်တကယ် porn စွဲ မှ“ရိပ်မိ porn စွဲ။“ ဒီမှာ Grubbs ပါ ဤလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်. tweetingသုံးသပ်သူ၏မှတ်ချက်များအပါအ ၀ င်
အနိုင်ကျင့်သောညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောကျွန်ုပ်၏ပထမစာတမ်းတွင် -“ ဤတည်ဆောက်မှုသည် [ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကို] ဂြိုလ်သားများပြန်ပေးဆွဲခံရခြင်းအတွေ့အကြုံများကဲ့သို့တိုင်းတာရန်အဓိပ္ပါယ်ရှိသောအဓိပ္ပါယ်ဖြစ်သည်။
နီကိုးလ် R ကိုချီးမွမ်း, ပါရဂူဘွဲ့ @NicoleRPrause
Josh Grubbs @JoshuaGrubbsPhD ဇူလိုင်လ 14
Grubbs သည်သူ၏ရူပဗေဒစာတမ်းတွင်“ ရိပ်မိစွဲလမ်းမှု” ဟူသောစကားစုကိုအကြိမ် ၈၀ အသုံးပြုခဲ့သော်လည်းဤကောက်နုတ်ချက်တွင် CPUI-80 ၏သဘောသဘာဝကိုအရိပ်အမြွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
“ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ CPUI-9 ဟာယေဘူယျအားဖြင့် hypersexual tendencies နဲ့အပြုသဘောဆက်နွယ်မှုရှိတယ်လို့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ Kalichman လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive စကေး။ ဤသည်ကယေဘူယျအားဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုအပြန်အလှန်ဆက်စပ်မှုမြင့်မားကြောင်းဖော်ပြသည်။
အထက်ပါကောက်နုတ်ချက်က CPUI-9 သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုကိုအကဲဖြတ်ကြောင်းမည်သို့ဖော်ပြသည်ကိုသတိပြုပါ။
အဖြစ်မှန်စစ်ဆေးမှု #5: “ ရိပ်မိစွဲလမ်းမှု” ကိုတစ်စုံတစ်ရာကိုအကဲဖြတ်သည့်မေးခွန်းလွှာမရှိပါ - ပစ္စည်းသို့မဟုတ်အပြုအမူ - ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းအပါအ ၀ င်. ထို့ကြောင့် 'Google Scholar' ရှာဖွေမှုသည်အောက်ပါ“ ရိပ်မိစွဲလမ်းမှု” အတွက်ရလဒ်သုညပြန်သည်။
အဖြစ်မှန်စစ်ဆေးမှု #6: “ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုအပေါ်ယုံကြည်မှု” နှင့်အမှန်တကယ်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုလက္ခဏာများကိုခွဲခြားနိုင်သောမေးခွန်းများမရှိပါ။ အခြားစွဲခြင်းစမ်းသပ်မှုများနည်းတူ CPUI သည်သုံးစွဲမှုကိုထိန်းချုပ်ရန်မစွမ်းနိုင်ခြင်း၊ သုံးစွဲရန်မဖြစ်မနေ၊ သုံးစွဲရန်တုန်လှုပ်ခြင်း၊ အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ လူမှုရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုးကျိုးများနှင့်အသုံးပြုခြင်းကိုအာရုံစူးစိုက်ခြင်းစသည့်စွဲလမ်းမှုအားလုံးတွင်တွေ့ရလေ့ရှိသောအပြုအမူများနှင့်လက္ခဏာများကိုအကဲဖြတ်သည်။ ။ တကယ်တော့ CPUI-1 ရဲ့မေးခွန်းနံပါတ် ၁ က“ ရိပ်မိ” စွဲလမ်းမှုကိုတောင်အရိပ်အမြွက်ဖော်ပြသည်။ ငါကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲဖြစ်ကြောင်းကိုယုံကြည်.
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရလျှင်“ ရိပ်မိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲစွဲစွဲလမ်းမှု” ဟူသောစကားစုသည် CPUI-9 ရှိစုစုပေါင်းရမှတ်ထက်မပိုပါ။ အမှန်တကယ် porn စွဲစမ်းသပ်မှု။ သုံးနှစ်အကြာတွင် Grubbs သည် CPUI-9 အား“ သိမြင်သော” အပြာစာပေစွဲလမ်းမှုစမ်းသပ်မှုအမှတ်အသားပြုရန်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေးဂျာနယ်ကပြင်းထန်စွာ“ အားပေးခဲ့သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်စာတမ်းနှင့်နောက်ဆက်တွဲ Grubbs လေ့လာမှုအားလုံးသည်“အဆိုပါ CPUI-9 အပေါ်စုစုပေါင်းရမှတ်"ထားသောစာပိုဒ်တိုများနှင့်အတူ"ရိပ်မိညစ်ညမ်းစွဲ။ " ဆောင်းပါးတွေကိုဥပမာအနေနဲ့ပြောတာက -
Grubbs လေ့လာမှုများက“ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုအပေါ်အမြင်” ကိုအကဲဖြတ်သည်ဟုဆိုရုံမျှသာမဟုတ်ဘဲမှားယွင်းစွာကောက်ချက်ချစေရုံသာမကအခြားလေ့လာချက်နှစ်ခုလည်းပြိုကွဲသွားသည်။
တောင်းဆိုချက် (၁) ၁။“ ညစ်ညမ်းသောအကျင့်စွဲခြင်းသည်ဘာသာရေးနှင့်ဆက်နွယ်သည်။
တကယ်မဟုတ်ဘူး။ ဤအပိုင်းကို ယာနျဘာသာတရားကိုသာကိုအားနည်းစွာနှင့်ဆက်စပ်သောကြောင်းထုတ်ဖော်ပြသ အမှန်တကယ် porn စွဲ; စဉ်တွင် ဤအပိုင်းကို အဆိုပါယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်ညစ်ညမ်းစွဲတောင်းဆိုမှုများ unravels ။
မမှန်ပါဘူး။ ဤအပိုင်းကို ဤပြောဆိုချက်ကို debunks ။
အဖြစ်မှန်စစ်ဆေးမှု #7: လေ့လာရေး porn ကိုအသုံးပြုခြင်း၏ပမာဏကိုဖြစ်ပါတယ်အသိအမှတ်ပြုရန် မဟုတ် porn စွဲဖို့ linearly ဆက်စပ် (အပိုင်းအတွက်အောက်တွင်နောက်ထပ် 5)
အရာအပေါ်သက်သေအထောက်အထားအဘယ်မှာရှိရဲ့ Leonhardt, et al။ အဆိုပါ Grubbs စာတမ်းများကိုတည်ဆောက်နေကြသည်နှင့်, အမည်ရ porn ကိုအသုံးပြုခြင်း၏ပမာဏကိုစစ်မှန်သောစွဲများအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသော proxy ကိုဖြစ်ပါသည် - ပိုပြီးသုံးပြီးသူတွေကိုနောက်ထပ် less ကို အသုံးပြု. များထက် "စွဲ" ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူ? Leonhardt, et al။ အကြိမ်ရေနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းခဲ့သည်၊ Grubbs သည်နာရီပေါင်းများစွာအသုံးပြုခဲ့စဉ်၊ သို့သော်စမ်းသပ်မှုသည်“ စစ်မှန်သောစွဲလမ်းမှုအတိုင်းအတာ” နှင့်အဓိပ္ပာယ်တူခြင်းမရှိသောအချက်ဖြစ်သည်။ အမှန်မှာ၊ စွဲစွဲလမ်းမှုကိုအကဲဖြတ်သည့်ကိရိယာများသည်စွဲလမ်းမှုအတွက်တစ်ခုတည်းသော proxy အဖြစ်“ အသုံးပြုမှုပမာဏ” ကိုမည်သည့်အခါမျှအသုံးမပြုပါ။
porn အသုံးပြုမှုပမာဏတစ်ခုကြောင်းပေးထား စွဲလမ်း၏စိတ်မချရအတိုင်းအတာဘာသာရေးနှင့် nonreligious အသုံးပြုသူများကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်း, အရှင်ဝေးမထောက်ပံ့နှင့်ဆက်ဆက်အချိန်မတန်မီအခါညစ်ညမ်းစွဲခြင်း (5-item ကိုစမ်းသပ်မှုအပေါ်အသုံးပြုမှုနာရီနှင့်ရမှတ်များအကြား) အနည်းငယ်ကှာဟအပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦး "ဘာသာရေးပြဿနာ" ကြောင်းမည်သည့်အကြံပြုချက်။
ထို့ပြင်ငါဘာသာရေးအရှက်ကွဲခြင်းသို့မဟုတ်အပြစ်ရှိတယ်လို့မ check လုပ်ထားနောက်ဆုံးအချိန်မူးယစ်ဆေးစွဲတှငျတှေ့သောသူတို့၏ mirror ကြောင့်ဦးနှောက်ကိုအပြောင်းအလဲဖြစ်ပေါ်သည်။ သို့သျောလညျးအခြို့သော 30 ရှိပါတယ် အာရုံကြောလေ့လာမှုများ compulsive porn အသုံးပြုသူများသည် / လိင်စွဲထဲမှာစွဲ-related ဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုအစီရင်ခံ။ ဤရွေ့ကားအချို့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်စစ်မှန်သောစွဲ၏ခိုင်မာတဲ့သက်သေအထောက်အထားပြင်ဆင်။
ပုဒ်မ 2: အဆိုပါ Leonhardt, et al။ 5-ကို item မေးခွန်းလွှာသာအကဲဖြတ်ထားပါသည် အမှန်တကယ် porn စွဲ
အခုတော့နောက်ကျောလက်ရှိ BYU လေ့လာမှု: Leonhardt, Willoughby, & Young-Petersen, 2017 (Leonhardt, et al ။ )။ “ သိမြင်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲစွဲစွဲလမ်းမှုကို” အကဲဖြတ်ရန်စာရေးသူသည်“ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်မှုစကေး” မှမေးခွန်း ၁၀ ခုမှမေးခွန်း ၅ ခုကိုအသာပေးခဲ့သည်။ “ Sexual Compulsivity Scale” ကို ၁၉၉၅ တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး၊ ဆက်ဆံရေး စိတျထဲမှာကို (AIDS ရောဂါကပ်ရောဂါစုံစမ်းစစ်ဆေးနှင့် ဆက်စပ်. ) ။
“ လိင်” သို့မဟုတ်“ လိင်” ကို“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ” ဖြင့်အစားထိုးခြင်းဖြင့် et al Leonhardt ။ စာရေးသူများကသူတို့အကဲဖြတ်ခြင်းဟုအမည်တပ်ထားသောမေးခွန်းပုံစံကိုဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ညစ်ညမ်းစွဲ၏အမြင်။ပိုမိုတိကျမှုနှင့်ဆန့်ကျင်သည်မှာသူတို့လေ့လာမှုတစ်ခုလုံးအနေဖြင့်ထိုစကားစုနှင့်“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းခြင်းအပေါ်ယုံကြည်မှု” နှစ်ခုလုံးကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ 5-ကို item မေးခွန်းလွှာအပေါ်စုစုပေါင်းရမှတ်။ "
သင့်ကိုယ်သင်မေးပါ၊ အောက်ပါမေးခွန်း ၅ ခုသည်“ တိုင်းတာသည်”ယုံကြည်ချက် ညစ်ညမ်းစွဲထဲမှာဒါမှမဟုတ်သူတို့အများဆုံးစှဲအတွက်မျှမျှတတဘုံလက္ခဏာသက်သေလက္ခဏာများနှင့်အပြုအမူအကဲဖြတ်ရန်သလဲ?
အကြောင်းကို "ကျွန်မအတှေး အရက်ကိုအသုံးပြုပြီး "ဘဝမှာပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်စေလျက်ရှိသည်
"ကျနော့်အလိုဆန္ဒမှ အရက်ကိုသုံးပါ "ငါ့အကိုနေ့စဉ်ဘဝ disrupts
"တစ်ခါတလေငါ၏အလိုဆန္ဒမှ အရက်မသောက်ရ "ငါထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးဤမျှလောက်ကြီးစွာသောဖြစ်ပါသည်
"ကျွန်မမရုန်းကန်ဖို့ရှိသည် အရက်ကိုသုံးပါ။ "
ထို့ကြောင့်အထက်ပါမေးခွန်း ၅ ခုသည်“ အရက်စွဲခြင်းအပေါ်ယုံကြည်ချက်” ကိုအကဲဖြတ်ပါသလား။ မည်သူမဆိုမြင်တွေ့နိုင်သည့်အတိုင်းဤမေးခွန်း ၅ ခုသည်အကဲဖြတ်နိုင်သည် အမှန်တကယ် သူတို့အတွက်အမှန်တကယ် porn စွဲအကဲဖြတ်သကဲ့သို့အရက်စွဲ, et al Leonhardt ။
ဒါပေမယ့်လူတစ်ယောက်ကိုပြောတာပဲ စုစုပေါင်း မေးခွန်း ၅ ခုစလုံးအတွက်ရမှတ်သည်စွဲလမ်းမှုကိုမိမိကိုယ်တိုင်ထက်“ စွဲလမ်းမှုအပေါ်ယုံကြည်မှု” နှင့်အဓိပ္ပါယ်တူသည်။ ဤမေးခွန်း ၅ ခုသည်လူတစ် ဦး ၏“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှုအပေါ်ယုံကြည်ချက်” ကိုအမှန်တကယ်စွဲလမ်းမှုနှင့်ခွဲခြားမှုအဖြစ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းမရှိသောကြောင့်အလွန်အထင်မြင်မှားစေသောနှင့်သိပ္ပံနည်းကျအခြေခံမရှိဘဲ။
ဓာတုနှင့်အမူအကျင့်စွဲလမ်းနှစ်ဦးစလုံးအတှကျအထူထောင်စွဲအကဲဖြတ်စမ်းသပ်မှုဆယ်စုနှစ်များစွာအကဲဖြတ်ရန်အထက်ရှိသူများအဖြစ်အလားတူမေးခွန်းများကိုအပေါ်အားကိုးသတိပြုပါ အမှန်တကယ်, မဟုတ် "မျှသာ ရိပ်မိ"စွဲ။ ဥပမာအားဖြင့်, et al Leonhardt ။ မေးခွန်းများကိုအဓိကစွဲအပြုအမူတွေကိုအကဲဖြတ်ရန် "အဖြစ်လူသိများလေ့အသုံးပြုသောအကဲဖြတ် tool ကိုအားဖြင့်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့4 CS ။သူတို့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရအောင်။ ဒီဟာကဘယ်လိုလဲ Leonhardt, et al မေးခွန်းများကိုလေးပါးကို CS နှင့်အတူပတျသကျ:
Cသုံးစွဲဖို့ ompulsion (2, 3)
နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းရန် Control (ကိုသုံးပါ2, 3, 4)
Cသုံးစွဲဖို့စည်းချက်မြန်အီလက်ထရွန်နစ် (1, 2, 3,4)
Cအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များ (ရှိနေသော်လည်းအသုံးပြုမှု ontinued2, 3)
တိုတိုပြောရရင်, et al Leonhardt ။ တစ်ဦး၏နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကို, ရောဂါလက္ခဏာနှင့်အပြုအမူအကဲဖြတ် အမှန်တကယ် porn စွဲ, မဟုတ် စွဲယုံကြည်မှု။ “ စွဲလမ်းမှုကိုယုံကြည်ရုံမျှသာ” ဟုအရိပ်အမြွက်ပြသည့်ဤမေးခွန်း ၅ ခုတွင်ဘာမှမရှိပါ။ မသာခဲ့ပါဘူး et al Leonhardt ။ စာရေးဆရာများသည်စာရွက်စာတမ်းများတွင်“ ရိပ်မိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲမက်ခြင်း” ဟူသောစကားစုကိုမလျော်ကန်စွာကျင့်သုံးခဲ့ကြပြီး Grubbs CPUI-9 နှင့်သူတို့၏ငါးပုဒ်မေးခွန်းလွှာနှစ်ခုလုံးသည်လူတစ် ဦး ၏“ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုအပေါ်ယုံကြည်မှု” ကိုသာအကဲဖြတ်နိုင်သည်ဟုထပ်မံပြောကြားခဲ့သည်။ Grubbs ကိုယ်တိုင်သည်“ စွဲလမ်းမှုအပေါ်ယုံကြည်မှု” ဟူသောစကားစုကိုတစ်ခါမျှမသုံးကြောင်းသတိပြုသင့်သည်။
အကယ်၍ ဤစာရေးဆရာများမှမှန်ကန်လျှင်၎င်းတို့၏အချက် ၅ ချက်သည်“ ရိပ်မိစွဲလမ်းမှု” ကိုအကဲဖြတ်ရန်ဖြစ်သည် အဘယ်သူမျှမ တည်ဆဲစွဲစမ်းသပ်ကာလအစဉ်အမြဲစစ်မှန်တဲ့စွဲအကဲဖြတ်ရန်နိုင်ဘူး။ ဤသည်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းစွဲနေတဲ့ကျယ်ပြန့်အကဲဖြတ်ရန်ထိုကဲ့သို့သောစမ်းသပ်မှုကိုအသုံးပြုဖို့သူအကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းစွဲကျွမ်းကျင်သူများရဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာဖို့အမှန်ပင်သတင်း groundbreaking မည်ဖြစ်သည်။
အဓိကအချက် -“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲမက်ခြင်း” (သို့)“ စွဲလမ်းမှုအပေါ်ယုံကြည်မှု” အဆင့်ကိုသုံးပြီးဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်၊ လေ့လာမှုတစ်ခုကိုဖတ်သည့်အခါတိုင်းဒီလိုအထင်မြင်မှားစေသောအသုံးအနှုန်းအားလုံးဟာတစ်ခုတည်းသောအရာတစ်ခုတည်းကိုသာဆိုလိုသည် - ” ထိုကဲ့သို့သောဆောင်းပါးများနှင့်လေ့လာမှုများမှတွေ့ရှိချက်များ၏စစ်မှန်သောအဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြရန်“ ရိပ်မိ” သို့မဟုတ်“ ယုံကြည်ချက်” စသည့်စကားလုံးများကိုချန်လှပ်။ “ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု” ဖြင့်အစားထိုးလိုက်ပါ။ ဘယ်မှာရှိ 100 ကျော်ကျော်သာဓကများနှင့်အတူဤလုပ်ကြရအောင် Leonhardt, et al။ သူတို့၏စာတမ်းတွင်“ ရိပ်မိ” သို့မဟုတ်“ ယုံကြည်ချက်” ကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်။
Leonhardt, et al။ said:
သို့ရာတွင်ထိုသို့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများကိုသာသူတို့ရဲ့အသုံးပြုမှုပတ်ဝန်းကျင်ဆက်ဆံရေးဟာစိုးရိမ်ပူပန်မှုခံစားရပုံ insofar သူတို့အသုံးပြုမှုကိုတစ် compulsive, စိတ်ပျက်စရာပုံစံရှိသည်ဖို့သူတို့ကိုယ်သူတို့ယုံကြည်အဖြစ်။
ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည် အဘယ်သူသည် သူတို့ရဲ့ compulsive porn အသုံးပြုမှုပတျဝနျးကငျြကျွန်တော်တို့ရဲ့ 5-item ကိုညစ်ညမ်းစွဲမေးခွန်းလွှာအတွေ့အကြုံကိုဆက်ဆံရေးဟာစိုးရိမ်ပူပန်မှုအပေါ်မြင့်မားတဲ့ဂိုးသွင်း။
ဤအရလဒ်များကိုအဆိုအရ, ညစ်ညမ်းကိုအသုံးပြုဖို့သောသူတို့အားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အသုံးပြုမှုဟာသူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်ခံစားရရန်မဖြစ်နိုင်ဖြစ်ကြောင်း, သူတို့အသုံးပြုမှုကိုတစ် compulsive, စိတ်ပျက်စရာပုံစံရှိသည်ဖို့သူတို့ကိုယ်သူတို့ယုံကြည်မဟုတ်လျှင်။
, အီချိန်းတွေ့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုပတ်ဝန်းကျင်ဆက်ဆံရေးဟာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတစ်ခုလက်အောက်ခံဆောက်လုပ်ရေးခဲ့ကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစား compulsive ရှိသည်ဖို့သူတို့ကိုယ်သူတို့ယုံကြည်သူတစ်ဦးချင်းစီ, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုဒုက္ခခံစားခဲ့ရ ချိန်းတွေ့မိတ်ဖက်ထွက်ရှာအထူးသဖြင့်တွန့်ဆုတ်နေပေမည်။
, အီချိန်းတွေ့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုပတ်ဝန်းကျင်ဆက်ဆံရေးဟာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတစ်ခုလက်အောက်ခံဆောက်လုပ်ရေးခဲ့ကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစား ညစ်ညမ်းစွဲနေသောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းချိန်းတွေ့မိတ်ဖက်ထွက်ရှာအထူးသဖြင့်တွန့်ဆုတ်နေပေမည်။
အနှစ်သာရအတွက်လေ့လာမှုတစ်ခုကိုညစ်ညမ်းစွဲသူတို့ရဲ့ compulsive ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောနိုင်စွမ်းမရှိခြင်းထိန်းချုပ်မှုကိုအသုံးပြုခြင်း, သူတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝများ၏နှောင့်အယှက်များနှင့်လူမှုရေးနှင့်အလုပ်ကတိကဝတ်များနှင့်တာဝန်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်၎င်းတို့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းအဖြစ်ယင်း၏ရလဒ်ကအနုတ်အကျိုးဆက်များ, ပတျဝနျးကငျြစိုးရိမ်စိတ်ကြုံတွေ့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ Unsurprisingly, သူတို့ရဲ့ porn စွဲအဖြစ်ကောင်းစွာရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးအမျိုးမျိုးရှုထောင့်ထိခိုက်ခဲ့သည်။
စောင့်ရှောက်သူများအနေဖြင့်အချို့သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုသူများသည်မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုနှင့်ပြpornနာရှိသောညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုမှုကိုလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်နိုင်သည်ကိုသတိပြုမိစေရန်ဂရုစိုက်သူများအနေဖြင့်အများပြည်သူအားမှားယွင်းစွာမှားယွင်းစွာစမ်းသပ်ခြင်းသည်“ ရိပ်မိ” နှင့်အမှန်တကယ်ခွဲခြားနိုင်သည် စွဲ။ ထိုအယူအဆနှစ်ခုကိုရှုပ်ထွေးစေပြီးထိုကဲ့သို့သောရှုပ်ထွေးမှုအပေါ် အခြေခံ၍ အခြေအမြစ်မရှိသောပြောဆိုမှုများပြုလုပ်ခြင်းသည်အထူးသဖြင့်အကျိုးမရှိ။
UPDATE: On သူမ၏ podcast တခုကိုဒီလေ့လာမှုအကြောင်းကို, Natasha Helfer က Parker အင်တာဗျူးဒေါက်တာဘရိုင်ယန် Willoughby ။ အင်တာဗျူးအတွက် Willoughby တစ်ခုတုန်လှုပ်ပြောဆိုချက်ကိုစေသည်:
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့နမူနာ၏ 10-15% ကြောင်းအမျိုးအစား (အမှန်တကယ် porn စွဲ) သို့သငျ့အကွောငျးကိုမွငျလြှငျ ... ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကအရေအတွက်အားထက်ပိုကြီးတဲ့ 2-3 ကြိမ်အကြောင်းကိုခဲ့ရုံအမြင်ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာ။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တစ်ဦးညစ်ညမ်းစွဲရှိခြင်းအဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ကို Self-labeling သူတွေကို၏ဤပိုကြီးကိုမြင်တော်မူ၏။ ကြောင်း၏အမူအကျင့်အပိုင်းအစတစ်ခုကိုတက်တန်းစီမသလိုပဲ။ "
အထက်ပါအချက်အလက်များကိုအရိပ်အမြွက်ပြောကြားသည့်သူ၏လေ့လာမှုတွင်ဘာမျှမရှိပါ။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေ့လာကြည့်ရအောင် -“ ရူပါရုံစွဲစွဲလမ်းမှု” သို့မဟုတ်“ အမှန်တကယ်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု” နှင့်ပတ်သက်သောတစ်ခုတည်းသောမေးခွန်းများသည်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောမေးခွန်း ၅ ခုဖြစ်သည်။ ဤမေးခွန်း ၅ ခုသည်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းခွဲခြားနိုင်စွမ်း Willoughby တွင်သူပိုင်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်ကိုမပေးနိုင်ပါ တကယ်တော့ porn စွဲသာတဲ့သူ ယုံကြည်သည် သူတို့ porn စွဲခဲ့ကြသည် (သို့သော်တကယ်တော့မ) ။
Willoughby ၏ဖော်ပြချက်များသည်လုံးဝမထောက်ခံပါ။ စွဲလမ်းမှုသည်ဖောက်သည်များ၏သမိုင်းကိုယူခြင်း၊ လူတွေ့မေးမြန်းခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်မေးခွန်းပုံစံများ (ဥပမာ Cambridge တက္ကသိုလ်မှဘာသာရပ်များနှင့်) ပေါင်းစပ်ပြီးမှသာသိရှိနိုင်သည်။ Amazon M-turk တွင်ဖြည့်ထားသော ၅ ပုဒ်ပါသောမေးခွန်းလွှာကို အသုံးပြု၍ မည်သည့်သုတေသနပညာရှင်မျှမည်သည့်ဘာသာရပ်ကိုမဆိုအမှန်တကယ်စွဲလမ်းသည်ဟုမှတ်ယူခြင်းသို့မဟုတ်စွဲလမ်းသည်ဟုမှားယွင်းစွာယုံကြည်ခြင်းဟုသာရိုးရှင်းစွာသတ်မှတ်ခြင်းသည်တရားမ ၀ င်ပါ။
Willoughby သည်“ ရိပ်မိစွဲလမ်းမှု” နှင့်“ စွဲလမ်းမှုအတွင်းပိုင်းအမြင်” ဟူသောစကားစုကိုထပ်ခါတလဲလဲအသုံးပြုသည်သာမကသူသည်ဘာသာရပ်များသည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုစွဲလမ်းသည်ဟုတံဆိပ်ကပ်သည်ဟုပြောဆိုသည်။ ကျွန်တော်ထပ်ခါတလဲလဲပြောပါမည်။ ဘာသာရပ်၏မေးခွန်းငါးခုပါသောမေးခွန်းလွှာသည် အဆိုပါလေ့လာမှုနှင့်ယခု Willoughby ရှိသည် မေးခွန်း ၅ ခု၏စုစုပေါင်းရမှတ်ကိုအောက်ဖော်ပြပါအချက်များအဖြစ်ပြန်လည်သတ်မှတ်ခဲ့သည် -“ ရူပါရုံစွဲစွဲလမ်းမှု၊ ”“ စွဲလမ်းမှုအပေါ်ယုံကြည်မှု”၊ “ ညစ်ညမ်းစွဲလမ်းမှုအတွင်းပိုင်းအမြင်” ။ "သူတို့ကိုစွဲလမ်းအဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုတံဆိပ်ကပ်".
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်လေ့လာမှုနှင့် ၀ ီလီဘီတို့နှစ် ဦး စလုံးသည်မေးခွန်း ၅ ခုပါသောဘာသာရေးနှင့်ရမှတ်များအကြားဆက်နွယ်မှုသည်ဘာသာရေးညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူများအနေဖြင့်အရှက်ကွဲခြင်းနှင့်စွဲလမ်းခြင်းလက္ခဏာများနှင့်လက္ခဏာများကိုမခံစားရခြင်းဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြသည်။ သူတို့ရဲ့လေ့လာမှုကအရှက်ကွဲခြင်း (သို့) အခြားစိတ်လှုပ်ရှားမှုများကိုအကဲဖြတ်ခြင်းမပြုသည်ကိုစဉ်းစားခြင်းဖြစ်သည်။
အပိုင်း ၃ ။ et al Leonhardt ။ ြဒပ်မဲ့သော
အဘယျအလို et al Leonhardt ။ ယုံကြည်ချက်နှင့်အမြင်ဖယ်ရှားပစ်ခဲ့ကြပါလျှင်ကဲ့သို့စိတ္တဇကြည့်? ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည့်ပထမ၊
ညစ်ညမ်းအပေါ်မကြာမီကသုတေသနစွဲ၏အမြင်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုအထက်နှင့်ကျော်လွန်ပြီးအပျက်သဘောဆောင်သောရလဒ်များခန့်မှန်းကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ သုတေသနမှာလည်းဘာသာရေးလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းမသက်ဆိုင်သူတို့အမှန်တကယ်ညစ်ညမ်းသုံးပြီးဘယ်လိုမကြာခဏ၏, ညစ်ညမ်းစွဲခံရဖို့သူတို့ကိုယ်သူတို့ရိပ်မိဖို့ပိုများပါတယ်ကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။ 686 လက်မထပ်ရသေးအရွယ်ရောက်သူတစ်ဦးနမူနာအသုံးပြုခြင်း, ဒီလေ့လာမှုသင့်မြတ်နှင့်ညစ်ညမ်းပတျဝနျးကငျြစျယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိုးရိမ်စိတ်များအကြားတစ်ဦးဖျန်ဖြေအဖြစ်ညစ်ညမ်းမှရိပ်မိစွဲစမ်းသပ်နေဖြင့်ယခင်သုတေသနအပေါ်ချဲ့ထွင်။ ရလဒ်များညစ်ညမ်းစွဲ၏အမြင်အလွန်အမင်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုပတ်ဝန်းကျင်ဆက်ဆံရေးဟာစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်သော်လည်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်ယာနျဘာသာတရားကိုကိုအားနည်းစွာ, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုပတျဝနျးကငျြပိုမိုမြင့်မားတဲ့ဆကျဆံရေးစိုးရိမ်စိတ်နှင့်အတူဆက်နွယ်ခဲ့ဖော်ပြခဲ့တယ်။ ညစ်ညမ်းစွဲ၏အမြင်တခုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာညီမျှခြင်းမော်ဒယ်တစ်ဦးဖျန်ဖြေအဖြစ်ဖြည့်စွက်သောအခါမည်သို့ပင်ဖြစ်စေ, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုပတ်ဝန်းကျင်ဆက်ဆံရေးဟာစိုးရိမ်ပူပန်မှုအပေါ်တစ်ဦးအသေးသွယ်ဝိုက်သက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်နှင့်ညစ်ညမ်းစွဲ၏အမြင်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုပတျဝနျးကငျြစျယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိုးရိမ်စိတ်များအကြားအသင်းအဖွဲ့ကမကထပြုခဲ့။ ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု, ယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်ရိပ်မိညစ်ညမ်းစွဲအစောပိုင်းဆက်ဆံရေးမျိုးဖွဲ့စည်းရေးအဆင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိုးရိမ်ပူပန်ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုချိတ်ဆက်ပုံကိုကျနော်တို့ကိုအောင်မြင်စွာညစ်ညမ်း၏ဘာသာရပ် addressing စုံတွဲများ၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးတက်စေခြင်းနှင့်ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးအတွက်အခက်အခဲများလျော့ပါးဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ နားလည်ခြင်းအားဖြင့်
ရိုးရိုးသားသားပြောပါ၊ အထက်ပါအချက်များမှစာဖတ်သူတစ် ဦး မျှထိုသို့မယူဆပါ ယုံကြည်ချက် porn စွဲအတွက်ဆန်းစစ်အားလုံး porn-related ပြဿနာများ၏တစ်ခုတည်းသောအကြောင်းရင်းရှိသနည်း
အခုဒီမှာ et al Leonhardt ။ စိတ္တဇအားဖြင့်၎င်းသည်၎င်း၏တွေ့ရှိချက်များအပေါ်အခြေခံသင့်သည်ဟုထင်ပြီး၊ ယုံကြည်မှု၊ ယုံကြည်မှု၊ ခံယူချက်စသည့်တိကျသောစကားစုများမပါရှိဘဲ Grubbs ၏သုတေသနနှင့်စပ်လျဉ်း။ ထပ်မံဖေါ်ပြထားသည်။ et al Leonhardt ။ စာရေးသူအပေါ်မှီခို:
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ပတ်သက်သောမကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သည့်သုတေသနများအရညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှုသည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းနှင့်အထက်တွင်ရှိသည့်ဆိုးကျိုးများကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သည် Grubbs အဖွဲ့၏လေ့လာမှုအချို့အရ“ ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသောအသုံးပြုသူများ” သည်အမှတ်ရကြသည် အနည်းငယ် "Cyber ​​Pornography Use Inventory" (CPUI-9) မှဘာသာရေးမဟုတ်သောညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူများထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်။ ဤတွေ့ရှိချက်ကိုကဏ္crossအလိုက်လေ့လာမှုအားလုံးမှတင်ပြသောအခြေအနေတွင်ကြည့်ရှုရမည် ဘာသာရေးလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းအတွက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုဝေးအောက်ပိုင်းနှုန်းထားများ။ ဤသည်နည်းပါးလာဘာသာရေးပုဂ္ဂိုလ်များကိုမှန်မှန် porn ကိုသုံးပါနှင့်, အရှင်ရှိပါတယ်ဆိုလိုသည် အနိမ့် ဘာသာရေးလူ ဦး ရေအကြား "အမှန်တကယ်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု" နှုန်း။ အများအပြားကဖြစ်နိုင်သောအကြောင်းရင်းများအကြံပြုခဲ့ကြ ဘာသာရေး porn အသုံးပြုသူလူဦးရေလောက porn အသုံးပြုသူလူဦးရေထက် porn စွဲမေးခွန်းအပေါ်ပိုမိုမြင့်မားဂိုးသွင်းစေခြင်းငှါ, အဘယ်ကြောင့်ရန်အဖြစ်။
686 လက်မထပ်ရသေးအရွယ်ရောက်သူတစ်ဦးနမူနာအသုံးပြုခြင်း, ဒီလေ့လာမှုညစ်ညမ်းပတျဝနျးကငျြစျယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိုးရိမ်စိတ်များအကြားတစ်ဦးဖျန်ဖြေအဖြစ်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုစမ်းသပ်နေဖြင့်ယခင်သုတေသနအပေါ်ချဲ့ထွင်။ ရလဒ်များညစ်ညမ်းစွဲအလွန်အမင်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုပတ်ဝန်းကျင်ဆက်ဆံရေးဟာစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်သော်လည်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်ယာနျဘာသာတရားကိုကိုအားနည်းစွာ, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုပတျဝနျးကငျြပိုမိုမြင့်မားတဲ့ဆကျဆံရေးစိုးရိမ်စိတ်နှင့်အတူဆက်နွယ်ခဲ့ဖော်ပြခဲ့တယ်။
ညစ်ညမ်းစွဲနေတဲ့အခြေခံအဆောက်အဦးညီမျှခြင်းမော်ဒယ်တစ်ဦးဖျန်ဖြေအဖြစ်ဖြည့်စွက်သောအခါမည်သို့ပင်ဖြစ်စေ, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုပတ်ဝန်းကျင်ဆက်ဆံရေးဟာစိုးရိမ်ပူပန်မှုအပေါ်တစ်ဦးအသေးသွယ်ဝိုက်သက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်နှင့်ညစ်ညမ်းစွဲတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုပတျဝနျးကငျြစျယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိုးရိမ်စိတ်များအကြားအသင်းအဖွဲ့ကမကထပြုခဲ့။ အစောပိုင်းဆက်ဆံရေးမျိုးဖွဲ့စည်းရေးအဆင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိုးရိမ်ပူပန်ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုချိတ်ဆက်ပုံကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု, ယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်ညစ်ညမ်းစွဲကျနော်တို့ကိုအောင်မြင်စွာညစ်ညမ်း၏ဘာသာရပ် addressing စုံတွဲများ၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးတက်စေခြင်းနှင့်ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးအတွက်အခက်အခဲများလျော့ပါးဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ နားလည်ခြင်းအားဖြင့်
တိုက်ယူ-Awayဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းခြင်းသာကိုအားနည်းစွာဆက်စပ်လူတစ် ဦး ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုကိုပတ် ၀ န်းကျင်တွင်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အတူ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ (မေးခွန်း ၅ ခု၏သုံးသပ်ချက်အရ) ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှုသည်“ အလွန်အမင်းဆက်စပ်နေသောလူတစ် ဦး ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုကိုပတ် ၀ န်းကျင်တွင်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အတူ။ အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရသော်ဘာသာရေးဖြစ်ခြင်းသည်ဆက်ဆံရေးနှင့် porn အသုံးပြုမှုရောထွေးမှုကိုအနည်းငယ်စိုးရိမ်စေသည် - အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။ သို့သော်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်းအသုံးပြုခြင်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတိုးပွားစေရန်အဓိကအခန်းကဏ္ played မှပါ ၀ င်သည်။ ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုသူများတွင်ဆက်ဆံရေးစိုးရိမ်စိတ်ကိုမည်သို့ဖော်ပြခဲ့သနည်း။ လေ့လာမှုအရ
porn စွဲခံနေရသင်၏မေတ္တာဘဝအပေါ်ထိခိုက်သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ တနည်းတစ်ဦးညစ်ညမ်းစှဲလမျးသူတစ်ဦးကို real-ဘဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖော်မှ porn ပိုနှစ်သက်စေခြင်းငှါ, နှင့်အရှင်လျော့နည်းမကြာခဏချိန်းတွေ့ကြ။
ပုဒ်မ 4: စျယာနျဘာသာတရားကိုတကယ်အမှန်တကယ် porn စွဲနှင့်ဆက်စပ်သောပါသလား
နိဒါန်း: လိင်ကုသထံမှသို့ရာတွင်သက်သေအထောက်အထားများအဘယ်သူသည် client များရှိပါသည်အကြံပြု ခံစား ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်းစွဲလမ်းသော်လည်း၊ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအချို့သည်ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသူများဖြစ်ပြီးညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့် ပတ်သတ်၍ အပြစ်ရှိသည်ဟုခံစားရပြီးအရှက်တကွဲအကျိုးနည်းရသည်။ ဤပုဂ္ဂိုလ်များသည်“ ရိပ်မိစွဲလမ်းမှု” မှသာခံစားနေရပြီး၊ ဖြစ်ကောင်း။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်များသည်ရပ်တန့်ချင်သော်လည်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုဆက်လက်အသုံးပြုကြသည်။ ဤ“ ရံဖန်ရံခါညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများ” သည်အမှန်တကယ်စွဲစွဲလမ်းသည်ဖြစ်စေ၊ အပြစ်ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ အရှက်တကွဲခံစားရသည်ဖြစ်စေမသေချာသည်မှာ Grubbs CPUI-9 ရော၊ et al Leonhardt ။ ၅ ပုဒ်ပါသောမေးခွန်းလွှာသည်“ ရိပ်မိစွဲလမ်းမှု” ကိုဤတစ် ဦး ချင်းစီတွင်ရှိသောအခြားမည်သူ့ကိုမဆိုအမှန်တကယ်စွဲလမ်းမှုနှင့်ခွဲခြားနိုင်သည်။
ယာနျဘာသာတရားကို porn ကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ် porn စွဲနှင့်အတူမပတျသကျဘူး
ယာနျဘာသာတရားကို porn စွဲကြိုတင်ခန့်မှန်းမထားဘူး။ အတော်လေးဆန့်ကျင်ဘက်။ ဘာသာရေးလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း porn စွဲဖြစ်လာဖို့ porn နှင့်အရှင်လျော့နည်းဖွယ်ရှိသုံးစွဲဖို့လျော့နည်းဖွယ်ရှိဖြစ်ကြသည်။
et al Leonhardt ။ နှင့်ယောရှုသည် Grubbs လေ့လာမှုများ ဘာသာရေးလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း၏ cross-အပိုင်းကိုမသုံးခဲ့ပါ။ အဲဒီအစား, သာ လက်ရှိ porn အသုံးပြုသူများသည် (ဘာသာရေးသို့မဟုတ် nonreligious) မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ကြသည်။ တော်တော်များများတိုင်းလေ့လာမှု Non-ဘာသာရေးတစ်ဦးချင်းစီ (နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ပါကဘာသာရေးတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအစီရင်ခံစာများဝေးအောက်ပိုင်းနှုန်းထားများပုံနှိပ်ထုတ်ဝေလေ့လာမှု 1, လေ့လာမှု 2, လေ့လာမှု 3, လေ့လာမှု 4, လေ့လာမှု 5, လေ့လာမှု 6, လေ့လာမှု 7, လေ့လာမှု 8, လေ့လာမှု 9, လေ့လာမှု 10, လေ့လာမှု 11, လေ့လာမှု 12, လေ့လာမှု 13, လေ့လာမှု 14, လေ့လာမှု 15, လေ့လာမှု 16, လေ့လာမှု 17, လေ့လာမှု 18, လေ့လာမှု 19, လေ့လာမှု 20, လေ့လာမှု 21, လေ့လာမှု 22.)
(porn အသုံးပြုမှုငယ်ရွယ်အထီးအတွက်တရားမျှတစွာတစ်လောကလုံးသောသူတို့တွင်) လောက porn အသုံးပြုသူများကိုနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာဘာသာရေး porn အသုံးပြုသူများကိုဆန်းစစ်လေ့လာရေးအားလုံးဘာသာရေးပုဂ္ဂိုလ်များတစ်အများကြီးသေးငယ်ရာခိုင်နှုန်းအတူတက်အဆုံးသတ်ရတတ်ပါတယ်။ နှစ်ခုယူ-Away: 1) ယာနျဘာသာတရားကို porn စွဲဆန့်ကျင်အကာအကွယ်ဖြစ်၏ 2) ဘာသာရေး porn အသုံးပြုသူနမူနာ atypical ဘာသာရေးလူများရှေ့သို့ skewed ဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာတစ်ခုအဖြစ်, ဒီ 2011 လေ့လာမှု (အဆိုပါဆိုက်ဘာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု Inventory: တစ်ဘာသာရေးနှင့်လောကနမူနာ Comparing) porn ကိုအသုံးပြုတဲ့သူဘာသာရေးနှင့်လောကကောလိပ်ယောက်ျားများ၏ရာခိုင်နှုန်းကဖော်ပြခဲ့သည် အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်တစ်ပါတ်:
ကောလိပ်ကျောင်းအသက်ဘာသာရေးယောက်ျားအပေါ်နောက်ထပ်လေ့လာမှု (မှားတယ်လို့ယုံကြည်ပေမယ့်ငါလုပ်နေတုန်းပဲ၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုမသုံးတဲ့ဘာသာရေးလူငယ်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ချက်၊ 2010) ထိုထင်ရှား:
ဆနျ့ကငျြ, ကောလိပ်အရွယ်ယောက်ျား၏ Cross-Section လေ့လာမှုများ (porn ၏အတော်လေးမြင့်မားတဲ့နှုန်းထားကြည့်ရှုသတင်းပို့ယူအက်စ် - ၂၀၀၈: 87%, တရုတ် - 2012: 86%, နယ်သာလန် - 2013 ခုနှစ် (အသက် 16): 73%) ။
et al Leonhardt ။ အားလုံး disregards အခြား အစဉ်အဆက်ဘာသာရေးအသုံးပြုသူများသည်ကြားတွင်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှုန်းအပေါ်ထုတ်ဝေလေ့လာမှုများ
တစ်ခုအံ့ဖှယျအပြောင်းအရွေ့အတွက် et al Leonhardt ။ စာရေးဆရာများဘာသာရေးအသုံးပြုသူများသည်ကြားတွင်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှုန်းပေါ်မှာရှိသမျှစစ်တမ်းများနှင့်လေ့လာမှုများမှားယွင်းတဲ့ထွက်ပြားချပ်ချပ်ဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုကြသည်။ တစ်နည်းပြောရရင်တော့, et al Leonhardt ။ ဘာသာရေးလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း၏အလွန်ကြီးမားပြီးတသမတ်တည်းရာခိုင်နှုန်းအစဉ်အဆက်ပြုမိ porn သုံးနှုန်းပေါ်မှာရှိသောအမည်မသိစစ်တမ်းအပေါ်သူတို့ရဲ့ porn အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. လိမ်လည်ခဲ့ကြကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ တကယ်တော့, Leonhardt, et al ဘာသာရေးလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းအစား Non-ဘာသာရေးလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းထက်ပိုမိုမြင့်မားမှုနှုန်းမှာညစ်ညမ်းအသုံးပြုဆိုလိုမှယခုအထိအဖြစ် go! အောက်ပါကောက်နုတ်ချက်ဒီရဲတင်းအခိုင်အမာဘို့မိမိတို့မျှတမှုကမ်းလှမ်း:
ဤရှေးရိုးစွဲလိင်ဆိုင်ရာတန်ဖိုးထားမှုများနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ဖွယ်ရာများကြောင့်ဘာသာရေးလူပုဂ္ဂိုလ်များသည်လောကလူ ဦး ရေထက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုမှုကိုအဆင့်နိမ့်စွာတင်ပြကြသည် (Carroll et al, 2008; Poulsen, Busby, & Galovan, 2013; Wright, 2013) ။ သို့သော်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များ (MacInnis & Hodson, 2015) နှင့်အွန်လိုင်းစာရင်းပေးသွင်းမှုများ (Edelman, 2009) ကိုအကဲဖြတ်သည့်အခြားလေ့လာမှုများကဘာသာရေး၊ ရှေးရိုးစွဲလူတန်းစားများမှလူတစ် ဦး သည်သူတို့၏လောကပြိုင်ဖက်များထက်အပြာစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုရန်ပိုမိုဖြစ်နိုင်သည်။ ဘာသာရေးလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအသုံးပြုမှုပတျဝနျးကငျြအရှကျကှဲခံစားချက်တွေကို၎င်းတို့၏ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုဖုံးကွယ်ဖို့ပိုဖွယ်ရှိဖြစ်နိုင်သည်အဖြစ် Self-အစီရင်ခံစာအချက်အလက်များနှင့်ရည်မှန်းချက်အတိုင်းအတာအကြားဒါဟာကွာဟမှု, ဘာသာရေးယဉ်ကျေးမှုအတွက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုဆန့်ကျင်အမည်းစက်ကိုအရိပ်အမြွက်။
ဒီဒီတော့ထောက်ခံမှု et al Leonhardt ။ ပြောဆိုချက်ကိုအပေါ်2လေ့လာမှုများမှလာ State-ကျယ်ပြန့် ဒေတာ: 1) MacInnis & Hodson, 2015 (ဂူးဂဲလ်အခြို့သောလိင်-related အသုံးအနှုန်းများအဘို့ရှာ), နှင့် 2) Edelman, 2009 (2007 အတွက်တစ်ခုတည်း paid porn site ကိုမှ Subscriptions) ။
မကြာခဏထပ်ခါတလဲလဲယူတာတွင်အမြင့်ဆုံးညစ်ညမ်းမှုနှုန်းအသုံးပြုမှုသည်ဘင်ဂျမင်အက်ဒလန်းမန်း၏ ၂၀၀၉ စီးပွားရေးစာတမ်းမှပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်အနီရောင်အလင်းတိတ်: အွန်လိုင်းအရွယ်ရောက် Entertainment ကဝယ်ယူဘယ်သူနည်းသူကတစ် ဦး ထံမှ subscription ကိုဒေတာအပေါ်လုံးဝမှီခို တခုတည်းသော သူသည်ညစ်ညမ်းသောစားသုံးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်နယ်များအဆင့်သတ်မှတ်သည့်အခါလခပေးသည့်အကြောင်းအရာကိုပေးသည့်ထိပ်တန်းဆယ်ခုသည်အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များစွာကိုလျစ်လျူရှုခဲ့သည်။ သူကဘာကြောင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ဒီတစ်ခုရွေးချယ်ခဲ့တာလဲ
Edelman ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအား ၂၀၀၇ ခုနှစ်ခန့်တွင်အခမဲ့လွှင့်ထုတ်လွှင့်သော“ ပြွန်ဘ်ဆိုက်များ” စတင်လည်ပတ်ခဲ့ပြီးနောက်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုသူများသည်၎င်းတို့ထံ ပိုမို၍ ပြောင်းလဲလာသည်ကိုငါတို့သိသည်။ ထို့ကြောင့်အက်ဒလမန်း၏အချက်အလက်တစ်ခုတည်းက (အခမဲ့နှင့်စာရင်းသွင်းထားသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်များ) ထောင်နှင့်ချီသောအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူများကိုကိုယ်စားပြုသည်ဟုမယူဆနိုင်ပါ။ သူ၏စက္ကူအထင်မြင်မှားစေသောထွက်လှည့် (နောက်ထပ်ကြည့်ရန် - Utah #1 Porn အသုံးပြုမှုအတွက်ဖြစ်ပါတယ်?) တကယ်တော့အခြားလေ့လာမှုများနှင့်ပြည်နယ်များအကြား 40th နှင့် 50th အကြားရရှိနိုင်ပါဒေတာများကိုရာထူး Utah porn အသုံးပြုခြင်း။ ကြည့်ရှုပါ:
ဤသုံးသပ်ချက်စာတမ်းသည်“ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုသုတေသနတစ်ဦးကပြန်လည်သုံးသပ်: နည်းလမ်းနှင့်အလေးရင်းမြစ်များမှရလဒ်များကို (2015) ။" Cyberpsychology: ဆိုက်ဘာစပေ့အပေါ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသုတေသနဂျာနယ် (2015) ။
သို့မဟုတ်ဤပိုမိုလွယ်ကူ 2014 ဆောင်းပါးဖတ်ရှုဖို့: Mormonism နှင့် Porn Rethinking: အမေရိကန် Utah 40th နယူး Porn ဒေတာများပါတယ်။
2014 အတွက် Pornhub ထံမှယူလူတစ်ဦးချင်းစီစာမျက်နှာအမြင်များ, (YBOP အပေါ်ဂရပ်).
စာရွက်“ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုသုတေသနတစ်ဦးကပြန်လည်သုံးသပ်: နည်းလမ်းနှင့်အလေးရင်းမြစ်များမှရလဒ်များကို (2015)"လည်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း MacInnis & Hodson, 2015 ။ အဘယ်အရာကိုရှင်းပြတစ်ခုကောက်နုတ်ချက် MacInnis & Hodson ပြု
MacInnis & Hodson, (2014) ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက်တစ်ဦးကို proxy အဖြစ်ဂူဂဲလ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းရှာဖွေရေးသက်တမ်းဒေတာကိုသုံးပါနှင့်ပြည်နယ်အဆင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်ယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်ရှေးရိုးစွဲများ၏အစီအမံအကြားဆက်ဆံရေးဆန်းစစ်။ သူတို့ကပိုပြီး Right-မြှောင်အတွေးအခေါ်ရှင်သဘောထားများနှင့်အတူပြည်နယ်များညစ်ညမ်း-related Google ရှာဖွေမှုများပိုမိုမြင့်မားမှုနှုန်းရှိသည်ရှာပါ။
နှင့်အတူပထမဦးဆုံးပြဿနာ MacInnis & Hodson: Google Trend ရှာဖွေရေးများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုရန်အတွက်ကြားခံမဟုတ်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့် Self- အစီရင်ခံစာများအရပုံမှန် porn အသုံးပြုသူများသည် bookmarks များမှတဆင့်သို့မဟုတ်ပြက်ဘ်ဆိုက်၏အမည်ကို browser ၏လိပ်စာနေရာတွင် (incognito mode) တွင်ရိုက်ထည့်ခြင်းအားဖြင့်ပုံမှန်နှစ်သက်သောညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ သူတို့အကြိုက်ဆုံးပြွန်ကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်တွင်ရောက်သည်နှင့်ပုံမှန် porn သုံးစွဲသူများသည် hyperlink များနှင့်ကြော်ငြာများမှတစ်ဆင့် porn site အသစ်သို့မကြာခဏရောက်ရှိကြပြီး Google search များအားလုံး ၀ ကျော်သွားသည်။
ဒုတိယအားနည်းချက် MacInnis & Hodson: Google ရှာဖွေမှုငါတို့အားတစုံတခုသောအထူးသဖြင့်အသုံးပြုသူ porn ကိုကြည့်သုံးစွဲအချိန်ပမာဏကိုအကြောင်းကိုဘာမျှမပြောပြထားသည်။ ဥပမာ, ပြည်နယ် (ဥပမာလူငယ်များ,) ပထမဦးဆုံးအကြိမ် porn ရှာဖွေနေသူများမြင့်မားမှုနှုန်းရှိနိုငျသူ aa အနည်းငယ်ဓါတ်ပုံတွေမှာသာတစ်ချက်, အခြားပြည်နယ်များက Google ကိုသုံးပါဘယ်တော့မှအဘယ်သူသည်နာတာရှည် porn အသုံးပြုသူပိုမိုမြင့်မားမှုနှုန်းရှိသည်, သေးနာရီပေါင်းများစွာသုံးဖြုန်းနိုင်ကြောင်းစဉ် porn ကိုကြည့်။
တစ်ဦးကတတိယအားနည်းချက်: MacInnis & Hodson လိင်နှင့် porn နှင့်ဆက်စပ်သောစကားလုံးများကို Google ရှာဖွေမှုနှုန်းမြင့်မားသောအခြားအကြောင်းပြချက်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ လိင်မှုကိစ္စနှင့်လိင်ဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များအကြောင်းအချက်အလက်ရှာဖွေနေသောလူငယ်များသည် Google ကိုအသုံးပြုကြလိမ့်မည်။ အစဉ်အလာရှိသောညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများသည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကိုရှောင်ကွင်းပြီးညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့တိုက်ရိုက်သွားနိုင်သည်။ ထို့အပြင်စစ်တမ်းများအရအများအားဖြင့်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုခြင်းနှုန်းသည်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက်ဖြစ်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်ငယ်ရွယ်သောလူ ဦး ရေမြင့်မားသောပြည်နယ်များမှလိင်မှုဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုဂူးဂဲလ်ရှာဖွေမှုနှုန်းပိုမိုမြင့်မားမည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
ယင်းအထဲက Check ပြည်နယ်လူဦးရေ၏အသက်အပိုင်းအခြားအားဖြင့်ပြည်နယ်။ အဆိုပါ 16 နှင့်အတူဤသို့ဖော်ပြသည် ဆယ်ကျော်သက်လူဦးရေအမြင့်ဆုံးရာခိုင်နှုန်း (Red States) (ဘာသာရေးနှင့်နိုင်ငံရေးအရရှေးရိုးစွဲအရ) ဟုမှတ်ယူကြသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, အားလုံးနှင့်အတူပြည်နယ်များ၏တ ဦး တည်း ဆယ်ကျော်သက်များ၏နိမ့်ဆုံးရာခိုင်နှုန်း ဘာသာရေးအရ၊ လစ်ဘရယ်နည်းပါးသောပြည်နယ်ဖြစ်သည်။ ဒီတစ်ခုကိန်းတစ်ခုတည်းကိုရှင်းပြနိုင်တယ် MacInnis & Hodson's တွေ့ရှိချက်များ။
ထို့အပြင်ဘာသာရေးဘာသာရေးပြည်နယ်အဆင့်အဆင့်နှင့်မြင့်မားသောမေးခွန်းထုတ်စရာတစ်ခုဖြစ်သော“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းအတွက် proxy” များနှင့်ဆက်စပ်မှုကိုအရေးကြီးသည့်အခါထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များစွာထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်စစ်တမ်းကောက်ယူမှုနှင့်လေ့လာမှုအားလုံးတွင်ဘာသာရေးလူ ဦး ရေအကြားညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုမှုနည်းသည်။
စာရွက်“ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုသုတေသနတစ်ဦးကပြန်လည်သုံးသပ်: နည်းလမ်းနှင့်အလေးရင်းမြစ်များမှရလဒ်များကို (2015) ။"အကြောင်းကိုအောက်ပါကပြောပါတယ် MacInnis & Hodson:
စားပွဲတင်3၏ပထမဦးဆုံးအတန်းအတွက်ရလဒ်တွေကိုကျနော်တို့ကို Google Trends data တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါငါတို့သည်လည်းအများဆုံးကိစ္စများတွင်စျယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်ရှေးရိုးစွဲအကြားတစ်ဦးကစာရင်းအင်းသိသိသာသာဆက်ဆံရေးမျိုးကိုရှာဖွေပြသခဲ့ကြသည်။ သို့သော်စားပွဲတင်3အတွက်အခြားအတန်းအခြားသုံးဒေတာအရင်းအမြစ်တစ်ခုခုသုံးပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တစ်ဦးသိပ်အားနည်းစာရင်းအင်းကြားဆက်ဆံရေးအရဖော်ပြသည်။ ဤရလဒ်သည် MacInnis နှင့် Hodson (2014) အခွားသုံးဒေတာအရင်းအမြစ်ကိုမဆိုအသုံးပြုခဲ့လျှင်, သူတို့ဖြစ်ကောင်းသူတို့ဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်ဆက်ဆံရေး၏ခွန်အားနှင့် ပတ်သက်. ၎င်းတို့၏စက္ကူတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောနိဂုံးချုပ်ဖို့လာကြပြီမယ်လို့အကြံပြုအပ်ပါသည်။
MacInnis နှင့် Hodson (2014) ပြည်နယ်အဆင့်စျယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်ပြည်နယ်အဆင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအကြားတစ်ဦးကစာရင်းအင်းသိသိသာသာဆက်ဆံရေးမျိုးကိုရှာဖွေဆိုတဲ့အချက်ကိုတစ်ဦးချင်းအဆင့်ကိုဒေတာကို အသုံးပြု. အတိတ်လေ့လာမှုများမှန်မှန်ဘုရားကျောင်းတက်ရောက်ရန်တဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီအများကြီးလျော့နည်းညစ်ညမ်းသုံးစွဲဖို့များပါတယ်ကွောငျးတှေ့ကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။
အောက်ဆုံးလိုင်း: ငါတို့မှာရှိတယ် et al Leonhardt ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများအတွက်အင်တာနက်ရှာဖွေမှုများဟာအလွန်ကျဉ်းမြောင်းသောကိုယ်စားပြုမှုနှင့်အတူပြည်နယ်လူဦးရေ၏ဘာသာရေးခေတ်ရေစီးကြောင်း correlating တစ်အတိုင်းအတာများမေးခွန်းထုတ်စရာလေ့လာမှု၏ကောက်ချက်၏မျက်နှာသာအတွက်ဘာသာရေးတစ်ဦးချင်းစီအပေါ်မျိုးစုံလေ့လာမှုများနှင့် Cross-Section စစ်တမ်းများလျစ်လျူရှုလိုက်ခြင်း။ မယုံနိုင်စရာ။
internal မကိုက်ညီ: အဆိုပါ et al Leonhardt ။ အခိုင်အမာဘာသာရေးတစ်ဦးချင်းစီ၏တစ်ဦးအလွန်ကြီးမားရာခိုင်နှုန်းအမည်မသိစစ်တမ်းများအပေါ်၎င်းတို့၏အသုံးပြုမှု porn အကြောင်းကိုအိပ်ရဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသူတို့ကရှိသည် အစဉ်အဆက်ထုတ်ဝေတိုင်းစစ်တမ်းများတွင်လိမ်ညာ. ဤစကားမှန်သည်ဆိုပါကကျနော်တို့ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုရမယ် Leonhardt, et al ။ ရဲ့ နည်းတူဘာသာရေး porn အသုံးပြုသူ Self-အစီရင်ခံစာများ, အပေါ်အခြေခံပြီးကိုယ်ပိုင်တွေ့ရှိချက် Leonhardt, et al။ ထပ်တလဲလဲလျှော့နဲ့သူတို့ရဲ့အလုံးစုံတို့ကိုရှေ့တော်၌ကတခြားညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုစစ်တမ်းများမှတ်s.
If Leonhardt, et al ။ ရဲ့ ဘာသာရေးဘာသာရပ်များသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုတသမတ်တည်းမဖော်ပြကြခြင်း (ဘာသာရေးဆိုင်ရာအသုံးပြုသူများသည်အခြားစစ်တမ်းများတွင်ရှိသည်ဟုဆိုကြသည့်အတိုင်း) ဆိုလိုသည်မှာဘာသာရေးဘာသာရပ်များတွင်“ အညွှန်းအသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေ” အတွက်ကိန်းဂဏန်းတန်ဖိုးကိုအထက်သို့ချိန်ညှိရန်လိုအပ်သည်။ ဘာသာရေးအဖွဲ့၏ကြိမ်နှုန်းကိုမြှင့်တင်ခြင်း (“ တည့်မတ်ခြင်း”) သည် ၄ ​​င်းတို့အသုံးပြုမှုကိုမေးခွန်း ၅ ခုပါသောရမှတ်များနှင့်ကိုက်ညီစေသည်။ ရိုးရိုးလေးပြောရလျှင်ဘာသာရေးဘာသာရပ်များတွင်အဆင့်မြင့်ညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုမှုသည်ညစ်ညမ်းမှုစွဲမေးခွန်းလွှာတွင်ရမှတ်များပိုမိုများပြားစွာဆက်စပ်နေသည်။ သို့မဟုတ်ပိုမိုရိုးရှင်းလွယ်ကူသေးသည်။ ဘာသာရေးနှင့်ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသူနှစ် ဦး စလုံးအတွက်အသုံးပြုသောညစ်ညမ်းပမာဏ - ညစ်ညမ်းမှုစွဲလမ်းမှုအဆင့်။ အကယ်၍ ဒီဟာဆိုရင်ဒါကဘာမှမရှိဘူး et al Leonhardt ။ အစီရင်ခံရန်။ null တွေ့ရှိချက်။
ဒီတော့ငါ၏စာရေးဆရာများကိုမေး Leonhardt, et al ။ , အောက်ပါ3၏အရာတိကျလဲ?
ဘာသာရေးဘာသာရပ်များအပေါ်အားလုံးအမည်မသိစစ်တမ်းများသူတို့ရဲ့ porn အသုံးပြုမှုကိုတသမတ်တည်းအစီရင်ခံစာအောက်မှာဘာသာရေးတစ်ဦးချင်းစီ၏တစ်ဦးအလွန်ကြီးမားရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သောကြောင့်မှတ်ခံရဖို့ရှိပါတယ်။ ဒီအပေါငျးတို့သ Grubbs လေ့လာမှုများပါဝင်ရမည်နှင့် Leonhardt, et al။ 2017
ဘာသာရေးလူဦးရေကြားတွင်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုတသမတ်တည်းအောက်ပိုင်းနှုန်းထားများ: အားလုံးဆင်တူတွေ့ရှိချက်သတင်းပို့အဖြစ်ဘာသာရေးဘာသာရပ်များအပေါ်အားလုံးအမည်မသိစစ်တမ်းများ, မကျြနှာကိုတနျဖိုးမှာယူရပါမည်။
အားဖြင့်သာလျှင်စစ်တမ်း et al Leonhardt ။ ယုံကြည်စိတ်ချရမည်။ ဘာသာရေးဘာသာရပ်များပေါ်မှာရှိသမျှသည်အခြားအမည်မသိစစ်တမ်းများမှတ်ခံရဖို့ရှိပါတယ်။ ဒါကဖြစ်ပါသည် Leonhardt, et al ။ , စာရေးဆရာများ '' လက်ရှိရပ်တည်ချက်.
ဘာသာရေး porn အသုံးပြုသူများကို Pre-ရှိပြီးသားအခြေအနေပိုမိုမြင့်မားမှုနှုန်းရှိသည်ဖို့များပါတယ်
ကောလိပ်ကျောင်း-အသက်အရွယ်၏ကြီးမားသောအများစု, ဘာသာရေးယောက်ျားမရှိသလောက် porn, အ Grubbs နှင့်ရှုမြင်ကြောင်းပေးထား et al Leonhardt ။ "ဘာသာရေးညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများ" ၏ပစ်မှတ်ထားသောနမူနာများသည်ဘာသာရေးလူနည်းစုသာဖြစ်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်“ လောကညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများ” ၏နမူနာများသည်ဘာသာရေးမဟုတ်သောလူအများစုကိုကိုယ်စားပြုသည်။
အများစုမှာငယ်ရွယ်သောဘာသာရေး porn အသုံးပြုသူများကသူတို့အစားအတွက် (100% porn မကြည့်မယ်လို့ပြောပါ ဒီလေ့လာမှုက) ။ ဒီတော့ဒီအသုံးပြုသူများသည်ဘာကြောင့်စောင့်ကြည့်နေကြသနည်း။ “ ဘာသာရေးညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများ” ၏ကိုယ်စားပြုမှုမရှိသောနမူနာတွင်ယခင်အခြေအနေများနှင့်အခြေအနေများနှင့်အတူရုန်းကန်နေရသောလူ ဦး ရေတစ်ခုလုံး၏ပမာဏသည်ပိုမိုမြင့်မားသောရာခိုင်နှုန်းပါဝင်သည်။ ဤအခြေအနေများသည်ဆေးစွဲသူများ (ဥပမာ - OCD၊ စိတ်ကျရောဂါ၊ စိုးရိမ်ခြင်း၊ လူမှုရေးစိုးရိမ်မှုရောဂါ၊ ADHD၊ မိသားစုစွဲလမ်းမှု၊ ကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာသို့မဟုတ်လိင်အလွဲသုံးစားမှု၊ အခြားစွဲလမ်းမှုစသည်တို့) တွင်မကြာခဏတွေ့ရသည်။
တစ်ဦးတည်းဤသည်အချက်အဘယ်ကြောင့်ဘာသာရေး porn အသုံးပြုသူများကိုရှင်းပြနိုင်မယ့်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သည်အတိုင်း, Grubbs အပေါ်အနည်းငယ်ပိုမိုမြင့်မားဂိုးသွင်းနှင့် et al Leonhardt ။ porn စွဲမေးခွန်း။ ဒါဟာအယူအဆအပေါ်လေ့လာမှုများကထောက်ခံနေသည် ကုသမှုရှာကြံ (ကျွန်တော်အတူတူချို့တဲ့အချပ်ကနေအချိုးအစားမမျှမမိုဃ်းသီးကျဖို့မျှော်လင့်ထားနိုင်တော်မူသော) porn / လိင်စွဲ။ ကုသမှုရှာဖွေနေသူထုတ်ဖေါ် အဘယ်သူမျှမ စွဲလမ်းနှင့်ယာနျဘာသာတရားကို၏စျယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်တိုင်းတာများအကြားဆက်ဆံရေးဟာ (2016 လေ့လာမှု 1, 2016 လေ့လာမှု 2) ။ အကယ်. et al Leonhardt ။ကုသမှုခံယူလိုသောဘာသာရေးညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများသည်အချိုးအစားမညီမျှမှုကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။
ဤ ဘာသာရေး porn သုံးစွဲသူများ 2016 လေ့လာမှု တစ်ဦးတည်းအကြားအနည်းငယ်ဆက်စပ်မှုကိုရှင်းပြနိုင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံတင်ပြ အမှန်တကယ် porn စွဲနှင့်ယာနျဘာသာတရားကို။ porn အသုံးပြုခြင်းနှင့်ယာနျဘာသာတရားကိုအကြားဆက်ဆံရေး curvilinear ဖြစ်ပါတယ်။ porn အသုံးပြုမှုကိုတိုးမြှင့်, ဘာသာရေးအလေ့အကျင့်များနှင့်ဘာသာတရား၏အရေးပါမှုအဖြစ် လြော့ပေါ့စေ - ပွိုင့်အထိ။ ဘာသာရေးလူတစ် ဦး သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုတစ်ပတ်တစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ်စတင်အသုံးပြုသည်နှင့်အမျှဤပုံစံသည်ပြောင်းပြန်ပြောင်းလဲသွားသည်။ ညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူသည်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုမကြာခဏစတက်ပြီးသူ၏ဘ ၀ တွင်ဘာသာရေး၏အရေးပါမှုသည်မြင့်တက်လာသည်။ လေ့လာမှုမှကောက်နုတ်ချက်။
ဘာသာရေး ၀ န်ထမ်းများနှင့်ဆုတောင်းခြင်းများသည်အနိမ့်ဆုံးသို့ကျဆင်းသွားပြီးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းတွင်ပိုမိုများပြားလာသည်။ ”
ဒီလေ့လာမှုကနေခေါ်ဆောင်သွားဒါကဂရပ်, အသုံးပြုသော porn ၏ပမာဏနှင့်အတူဘာသာရေးဝန်ဆောင်မှုတက်ရောက်သူနှိုင်းယှဉ်:
ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသူများ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုမှုသည်ထိန်းချုပ်မှုမရှိသောနေရာတွင်ပိုမိုကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှသူတို့၏ပြproblemနာဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုဖြေရှင်းရန်နည်းနာအနေဖြင့်ဘာသာတရားသို့ပြန်သွားကြပုံရသည်။ ဤအချက်သည်အံ့အားသင့်စရာမဟုတ်ချေ။ အဆင့် ၁၂ ဆင့်ကို အခြေခံ၍ စွဲလမ်းမှုပြန်လည်ထူထောင်ရေးအဖွဲ့များတွင် ၀ ိညာဉ်ရေးရာသို့မဟုတ်ဘာသာရေးဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သည်။ စာတမ်းရေးသားသူကဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောရှင်းပြချက်တစ်ခုအနေဖြင့်အကြံပြုခဲ့သည်။
... စွဲ၏လေ့လာမှုများသူတို့၏စွဲ၌အကူအညီမဲ့ခံစားရသူတွေကိုမကြာခဏသဘာဝလွန်အကူအညီများကိုထုတ်ယူကြောင်းဖော်ပြသည်။ အမှန်စင်စစ်စွဲလမ်းမှုနှင့်အတူရုန်းကန်နေရသောလူများအားကူညီရန်ရှာဖွေသည့်အဆင့် ၁၂ ဆင့်တွင်ပိုမိုမြင့်မားသောအာဏာကိုလက်နက်ချခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောသင်ကြားမှုများပါဝင်သည်။ ခရစ်ယာန် ၁၂ ဦး ပါသောရှေးရိုးစွဲခရစ်ယာန်အစီအစဉ်များသည်ဤဆက်သွယ်မှုကို ပို၍ ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြသည်။ အလွန်အန္တရာယ်များသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုသူများ (ဆိုလိုသည်မှာအတင်းအဓမ္မသို့မဟုတ်စွဲလမ်းမှု၏လက္ခဏာများဖြစ်နိုင်သည့်အဆင့်များကိုအသုံးပြုခြင်း) ကိုအမှန်တကယ်ဘာသာရေးကိုစွန့်ခွာစေမည့်အစားအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှဘာသာရေးဘက်သို့တွန်းပို့နေခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်သည်။
စွဲပိုဆိုးလာရင်အဖြစ်မိမိတို့အယူဝါဒမှပြန်လာသောဘာသာရေး porn အသုံးပြုသူများကဒီဖြစ်စဉ်ကိုအလွယ်တကူအမှန်တကယ် porn စွဲနှင့်ယာနျဘာသာတရားကိုအကြားမည်သည့်ဆက်စပ်မှုကိုရှင်းပြနိုင်ဘူး။
သူတို့၏လောကညီအစ်ကိုများနှင့်မတူဘဲအမှန်တကယ်ဆေးလိပ်ဖြတ်ရန်ကြိုးစားခဲ့သောကြောင့်၊ ဘာသာရေးဆိုင်ရာညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုမေးခွန်းများအပေါ် ပိုမို၍ အမှတ်ရနိုင်ပါသလား။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်သူတို့သည်လေ့လာဆန်းစစ်မှုအရ porn စွဲလမ်းမှုလက္ခဏာများနှင့်လက္ခဏာများကိုပိုမိုသိရှိနိုင်သည် et al Leonhardt ။ 5-ကို item မေးခွန်းလွှာ။
အွန်လိုင်းပေါ်ရှိညစ်ညမ်းသောပြန်လည်ထူထောင်ရေးဖိုရမ်များကိုနှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍ သုတေသနပညာရှင်များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုညစ်ညမ်းမှုမှကင်းဝေးစေသူများထံမှခွဲထုတ်သင့်သည်၊ ညစ်ညမ်းမှု၏မိမိကိုယ်မိမိအကျိုးသက်ရောက်မှုများအကြောင်းမေးမြန်းသောအခါသူတို့ကိုခွဲထုတ်သင့်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဒီကနေ့ညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများ (ဘာသာရေးနှင့်ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသူနှစ် ဦး စလုံး) သည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုအပေါ်သူတို့၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုနားလည်မှုနည်းပါးသည် ပြီးနောက် သူတို့ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစား (နှင့်မဆိုဖြတ်သန်း ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေ).
ယေဘုယျအားဖြင့်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုသူများသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုအန္တရာယ်ကင်းသည်ဟုယူမှတ်ကြသည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့သည်သည်းမခံနိုင်သည့်လက္ခဏာများသို့မရောက်မချင်း (ညစ်ညမ်းသောလူမှုရေးစိုးရိမ်မှုများ၊ စစ်မှန်သောမိတ်ဖက်များနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုနိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း / စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည့်အရာများအထိတိုးပွားလာခြင်း) သည်အထိညစ်ညမ်းမှုကိုအန္တရာယ်ကင်းသည်ဟုယူမှတ်ကြသည်။ သို့မဟုတ်လည်းအန္တရာယ်များ) ။ ထိုအလှည့်အပြောင်းမတိုင်မီကသင်သည်သူတို့၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့် ပတ်သက်၍ သူတို့ကိုမေးမြန်းပါက၎င်းတို့အားလုံးသည်ကောင်းမွန်ကြောင်းအစီရင်ခံကြလိမ့်မည်။ သူတို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းတို့သည်“ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးအသုံးပြုသူများ” ဟုယူဆကြပြီးမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုဆေးလိပ်ဖြတ်နိုင်ပြီး၎င်းတို့တွင်ရှိသည့်လက္ခဏာများသည်တစ်စုံတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်သည် အခြားသူ။ အရှက်ကွဲခြင်းကို? Nope ။
ဆနျ့ကငျြအများစုဘာသာရေး porn အသုံးပြုသူများသည်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုအန္တရာယ်များကြောင်းသတိပေးခဲ့သည်ပါပြီ။ သူတို့ဟာထို့ကြောင့်လျော့နည်း porn ကိုအသုံးပြုကြရန်နှင့်တစ်ကြိမ်ထက်ဖြစ်ကောင်းပို up ပြုလုပ်ပေးခြင်းနှင့်အတူစမ်းသပ်ကြဖို့ပိုများပါတယ်။ porn အသုံးပြုသူများသည် (ဘာသာရေးသို့မဟုတ်မပါ) ရှာဖွေတွေ့ရှိသောအခါဖြစ်သကဲ့သို့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းဖြတ်အတူထိုသို့သောစမ်းသပ်ချက်အလွန်သိရှိနေသောခေါင်းစဉ်:
ဘယ်လို porn ကိုအသုံးပြုခြင်း (ရောဂါလက္ခဏာများဖြတ်ပြီးနောက်လျော့ကျရန်စတင်မကြာခဏဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့) စိတ်ခံစားမှု, လိင်နှင့်မဟုတ်ရင်, ဆိုးရွားစွာသူတို့ကိုထိခိုက်ထားပါတယ်
ဦးနှောက်ကိုချိန်ခွင်လျှာညှိဖို့ပြန်လာမတိုင်မီရုပ်သိမ်းရေး, ခဏလက္ခဏာတွေပိုဆိုးစေနိုင်သည်ကိုဘယ်လို [ဤကဲ့သို့သောရောဂါလက္ခဏာများ၏ဖြစ်ရပ်မှာတော့]
သူတို့တစ်ခုခုမစွန့်လွှတ်ချင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လောက်ဆိုးလိုက်မလဲ (ဒါကဒါ အရှက်ကွဲခြင်းသုတေသီများယူဆသည့်အတိုင်းဘာသာရေးအသုံးပြုသူများကမကြာခဏအစီရင်ခံကြသောကြောင့်၊ ဆေးစွဲသူအားလုံးသည်ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသည်ဖြစ်စေမထွက်နိုင်တော့ဟုခံစားရသောအခါကံမကောင်းအကြောင်းမလှပါ။
သူတို့ porn သုံးစွဲဖို့ခိုင်မာတဲ့မတရားသောတွေ့ကြုံခံစားပါ။ တဏှာမကြာခဏတစ်ပါတ်ဒါမှမဟုတ် porn အသုံးပြုခြင်းမှကြာကြာချိုးနှင့်အတူပြင်းထန်မှုတိုးပွါး။
ထိုသို့သောအတွေ့အကြုံများကဆေးလိပ်ဖြတ်ရန်ကြိုးစားသူများအားညစ်ညမ်းသောအကျင့်နှင့် ပတ်သက်၍ ပို၍ သတိထားစေသည်။ ပိုမိုများပြားသောဘာသာရေးအသုံးပြုသူများသည်ထိုကဲ့သို့သောစမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်လေ့ရှိရာစိတ်ပညာဆိုင်ရာကိရိယာများသည်ညစ်ညမ်းမှုနည်းသောအကျင့်ကိုအသုံးပြုသော်လည်းများသောအားဖြင့်ဘာသာရေးမဟုတ်သောအသုံးပြုသူများထက်သူတို့၏ညစ်ညမ်းမှုကိုပိုမိုစိုးရိမ်ကြောင်းပြသမည်ဖြစ်သည်။
တနည်းအားဖြင့်သုတေသီများသည်လောကညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများတစ်ခါတစ်ရံရှိမရှိကိုလည်းမစုံစမ်းသင့်ပါ misperceive ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသူများဟုယူဆရမည့်အစားညစ်ညမ်းသောပြproblemsနာများရှိနေသော်လည်း၎င်းတို့သည်၎င်းတို့ကိုအသုံးနည်းသော်လည်းမှားယွင်းစွာအသုံးပြုသည်။ အဆုံး၌စွဲလမ်းမှုကိုသုံးစွဲမှုပမာဏသို့မဟုတ်ကြိမ်နှုန်းအပေါ် မူတည်၍ မဟုတ်ဘဲအားနည်းစေသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများအပေါ် မူတည်၍ အကဲဖြတ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။
မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ရှိသည်မဟုတ်သူတို့ထံမှဖြတ်နှင့်အတူစမ်းသပ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေကိုခွဲခြားရန်အကျရှုံးခြင်း, ယာနျဘာသာတရားကို, အရှက်ကွဲခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအကြားဆက်ဆံရေး၏သက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. ကောက်ချက်ဆွဲရန်ကြိုးစားနေသုတေသနအတွက်ကြီးမားတဲ့ရှက်ကြောက်ဖြစ်ပါသည်။ အချက်အလက်များကိုအထောက်အထားအဖြစ်အဓိပ္ပါယ်ကောက်ယူရန်လွယ်ကူသည်ဘာသာ လူတွေကိုညစ်ညမ်းစေတဲ့သူတွေကိုတခြားသူတွေထက်နည်းရင်တောင်စိတ် ၀ င်စားစေတယ်။ သူတို့ကဘာသာတရားမဟုတ်ရင်တောင်မှသူတို့ကစိုးရိမ်စရာမရှိဘူး။ ”
ပိုမိုခိုင်လုံသောနိဂုံးချုပ်ချက်မှာထွက်ခွာသွားရန်ကြိုးစားသူများနှင့်အထက်ပါအချက်များကိုသဘောပေါက်နားလည်သူများသည် ပိုမို၍ သက်ဆိုင်ကြောင်းနှင့်ဘာသာတရားသည်ထိုကဲ့သို့သောစမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ရန်အကြောင်းအရင်းမျှသာဖြစ်ပြီး၊ စိတ်ပညာရှင်များသည်ဘာသာရေး၊ ၀ ိညာဉ်ရေးရာနှင့်ရိုးရှင်းသောဆက်နွယ်မှုများ ပြုလုပ်၍ မသုံးသောသုံးစွဲသူများနှင့်ဆေးဖြတ်ရန်ကြိုးစားသောသုံးစွဲသူများကိုနှိုင်းယှဉ်သောအခါ“ ပန်းသီး” နှင့်“ လိမ္မော်” တို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်နေသည်ကိုသတိမပြုမိဘဲစိတ်ရှုပ်စေသောနိဂုံးချုပ်မှုများကိုတွေ့ရခြင်းသည်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်သည်။ တနည်းကား, သာယခင်ရှင်းလင်းစွာ porn ကိုအသုံးပြုခြင်း၏အန္တရာယ်များနှင့်ပျက်ဆီးကြည့်ဖို့လေ့, ဖြစ်စေမသူတို့ဘာသာရေးဖြစ်ကြသည်။
ဤသည်ရှက်ကြောက်လွန်းမကြာခဏပျောက်မကြာခဏတွေ့ကြုံခံစားကြောင်းမဟုတ်သောဘာသာရေးအသုံးပြုသူများပြင်းထန်ရောဂါလက္ခဏာမှအာရုံဆွဲချင်သောသူတို့သည်အမြတ်ထုတ်သည်။ Agnostic အသုံးပြုသူများအချိန်သူတို့အားဖြင့်ပိုပြီးပြင်းထန်ရောဂါလက္ခဏာရှိသည်ဖို့လေ့ do ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းတဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုသူများထက်နိမ့်နိမ့်နိမ့်နိမိတ်လက္ခဏာများမှာနိမ့်ကျတဲ့နေရာမှာဆေးလိပ်ဖြတ်လေ့ရှိကြလို့ပဲ။ အဘယ်ကြောင့်သုတေသီများသည်ဤဖြစ်ရပ်လေ့လာနေကြသည်မဟုတ်လော
တကယ်တော့ကျနော်တို့ကသူတို့နှင့်ခြင်္သေ့ဝေစုဝေမျှမည် porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ် မသိဝါဒီဖြစ်ကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်? non-ဘာသာရေးဒီတော့သူတို့ထိုကဲ့သို့သောသုံးပြီးလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှု, အစွန်းရောက်ပစ္စည်းမှတင်းမာမှု, စျြလြူရှုမှု, အခက်အခဲညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲတစ်ဦးစိုက်ထူရရှိ, အခက်အခဲတိုးမြှင့်အဖြစ်, ကောင်းစွာသတိပေးဆိုင်းဘုတ်များအတိတ်ကြောင့်ဆက်လက်အသုံးပြုကြောင်းအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများ၏အန္တရာယ်များ၏ဖျောင်းဖျခံရဖို့လေ့ကြောင့်, ဒါကြောင့်ထွက်ကွန်ဒုံးသို့မဟုတ်ထှတျအထိပျပါတနာတစ်နှင့်။
အမှန်မှာပေါ့ပေါ့ပါးပါးသို့မဟုတ်ရံဖန်ရံခါခဏခဏဖြစ်ပွားလေ့မရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းသည်ပင်လျှင်အသုံးပြုသူအချို့၏လိင်ဆက်ဆံမှုကို ၄ င်းတို့၏ ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မှုကိုဖြစ်စေသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှု။ ဒီမှာ လူတစ်ယောက်ရဲ့အကောင့်။ တစ်ချိန်ကစိတ်မဝင်စားသို့မဟုတ်တွန်းလှန်ခဲ့ကြောင်းညစ်ညမ်းအကြောင်းအရာစက်လှေကားထဲမှာဘုံဖြစ်ပါသည် အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်၏ထက်ဝက်။ အထက်တွင်ဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်းရေတိုမှာတော့, ခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောအသုံးပြုမှုကိုအဘယ်သူမျှမ panacea ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခဏကိုအသုံးပြုဖို့ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ porn အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်နေကြသည်ပါဘူးသူများသည်အတော်လေးမပါဘဲသူတို့ဘာသာရေးန်ဆောင်မှုကာလအတွင်း porn အကြောင်းကိုအဘယ်သို့ကြားနာရသည်ကနေသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စမ်းသပ်ချက်အပေါ်အခြေခံပြီးသက်ဆိုင်ရာခံရဖို့အကြောင်းပြချက်ကောင်းရှိနိုင်ပါသည်။
ဒါကြောင့်တစ်ဦးသည်အချိန် porn ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူ၎င်းတို့၏အတွေ့အကြုံများကိုနှိုင်းယှဉ်ဖို့ (ဘာသာရေးနှင့်မဟုတ်ရင်နှစ်ဦးစလုံး) porn အသုံးပြုသူများကမေးတယ်ကြောင်းသုတေသနတည်ဆောက်ရန်ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်? မြင် ၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုဖော်ပြမှနာတာရှည်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုပပျောက် ဖြစ်နိုင်ချေလေ့လာမှုပုံစံဒီဇိုင်းပါ။
ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း porn အသုံးပြုသူများသည်ညစ်ညမ်းစွဲမေးခွန်းအပေါ်ပိုမိုမြင့်မားဂိုးသွင်းစေခြင်းငှါ, အဘယ်ကြောင့်ဇီဝအကြောင်းရင်းများ
အလွန်မကြာခဏအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုဒီနေ့ရဲ့သုံးစွဲသူအများအပြားအဘို့အကျွမ်းတဝင်အန္တရာယ်များပါတယ်။ ဤရွေ့ကားကပိုလွန်ကဲပစ္စည်း, ဆင်းရဲတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှု, စွဲလမ်း, နှင့် / သို့မဟုတ်အစစ်အမှန်မိတ်ဖက် (အဖြစ် anorgasmia နှင့်စိတ်မချရစိုက်ထူ) အားဆွဲဆောင်မှုများတဖြည်းဖြည်းဆုံးရှုံးမှုတင်းမာမှုများပါဝင်သည်။
ဒီထက်ကောင်းကောင်းသိပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအသုံးပြုမှုကို (ဥပမာ, porn Bing ၏2နာရီအခြားညစ်ညမ်း session တစ်ခုမတိုင်မီ abstinence ၏ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်) စွဲလမ်းတစ်သိသိသာသာအန္တရာယ်ဖြစ်စေသောအချက်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါအကြောင်းပြချက်ဇီဝဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အပေါ်စွဲလမ်းသုတေသနတစ်ခုတစ်ခုလုံးကိုခန္ဓာကိုယ်ရှိ ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအသုံးပြုမှု တိရစ္ဆာန်များနှင့်လူသားအတွက်တာဝန်ရှိဦးနှောက်ဖြစ်ရပ်များ elucidating ။
ပို. ပင်ထူးခြားပြောင်မြောက် abstinence ၏ကာလ (2-4 ရက်သတ္တပတ်) ဖြစ်ပါသည် neuroplastic အပြောင်းအလဲများကိုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြ ထိုကဲ့သို့သောရှည်လျားလပ်ချိန်ယူပါဘူးတဲ့အသုံးပြုသူအတွက်ပေါ်ပေါက်ကြပါဘူး။ ဦးနှောက်တွင်ဤပွောငျးလဲအစပျိုးခြင်းတုန့်ပြန်သုံးစွဲဖို့မတရားသောတိုးမြှင့်။ ထို့ပြင် စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်ကအပြောင်းအလဲများ ပင်အသေးစားစိတ်ဖိစီးမှုအကြောင်းမရှိစေနိုင်ပါတယ်ထိုကဲ့သို့သော သုံးစွဲဖို့မတရားသော.
အခုတော့ရဲ့ဘာသာရေးနှင့် nonreligious porn အသုံးပြုသူတစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်ဖို့ပြန်လာပါစေ။ ဘယ်အုပ်စုတစ်စုကပိုပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအသုံးပြုသူများကိုထည့်သွင်းရန်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသနည်း ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းသုတေသနပေးထား ဘာသာရေး porn အသုံးပြုသူများက porn ကို အသုံးပြု. ခံရဖို့မကြိုက်တတ်တဲ့, ဖြစ်ကောင်းတစ်မူးရူး-abstinence သံသရာထဲမှာဝဲလောကအသုံးပြုသူများသည်ထက် ပို. ဘာသာရေးရှိပါတယ်။ ဒါကဘာသာရေးအသုံးပြုသူတစ်ဦးအချိုးအစားမညီမျှမှုဝေစုဖြစ်လေ့မယ်လို့ဖြစ်ပါသည်လောကအသုံးပြုသူများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်သူတို့ကခဲထက် ပို. ရက်အနည်းငယ်၏အားလပ်ချိန်ယူကြောင်းသတင်းပို့ "ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအသုံးပြုသူများသည်။ " - သူတို့က porn အသုံးပြုမှုကိုဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းသည်အသုံးပြုသူများဖြစ်လာမဟုတ်လျှင်။
ယင်းမူးရူး-abstinence သံသရာ၏နောက်ထပ်အရေးကြီးသောအကျိုးသက်ရောက်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း porn အသုံးပြုသူများကိုတိုးချဲ့ကွာဟချက် (နှင့်မကြာခဏတိုးတက်မှု) ကိုတွေ့ကြုံခံစားသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ သူတို့ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းမကြာခဏအသုံးပြုသူများကနဲ့မတူဘဲအတွက်, သူတို့ရဲ့ porn အသုံးပြုမှုကိုကသူတို့ကိုထိခိုက်လျက်ရှိသည်ကိုဘယ်လိုမြင်နိုင်ပါသည်။ ဤသည်တစ်ဦးတည်းနေတဲ့ညစ်ညမ်းစွဲမေးခွန်းလွှာအပေါ်ပိုမိုမြင့်မားရမှတ်များဆီသို့ဦးတည်ပေလိမ့်မည်။ တစ်ဦးကစက္ကန့်, ပိုမိုအရေးကြီးသောရလဒ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း porn အသုံးပြုသူများသည်ခိုင်ခံ့သောမတရားသောပိုပြီးမကြာခဏဖြစ်စဉ်များတွေ့ကြုံခံစားပါလိမ့်မယ်ဆိုတာပါပဲ။ ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းသည်အသုံးပြုသူများအတွက်ဂူလုပ်ပေးသည့်အခါတတိယ, သိပ္ပံသူတို့မကြာခဏထိန်းချုပ်မှုထဲကပိုပြီးခံစားရလျက်, မူးရူးပြီးတာကတော့စိတ်ဓာတ်ပိုမိုတွေ့ကြုံခံစားလိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းထားသည်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့တယ်။ သူတို့လောကတို့၌ရှိသောညီအစ်ကိုတို့သည်ထက်လျော့နည်းအကြိမ်ရေနှင့်အတူအသုံးပြုနေသည်သော်လည်း, တိုတောင်းခုနှစ်တွင်, (ဘာသာရေးနေသော) ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအသုံးပြုသူများကိုအတော်လေးစွဲနိုင်ပါတယ်နှင့်ညစ်ညမ်းစွဲစမ်းသပ်မှုအပေါ်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်မြင့်မားသောဂိုးသွင်း။
အခြေအနေအရ, ဒါဟာဘာသာရေးနှင့် nonreligious အသုံးပြုသူများအကြားခြားနားချက်သည်အရှက်ကွဲခြင်းအကောင့်အသစ်များ၏ကောက်ချက်ချဖို့စောလွန်းဖြစ်ပါတယ်။ သုတေသီများပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအသုံးပြုမှုများ၏သက်ရောက်မှုများအတွက်ထိန်းချုပ်ရပါမည်။ ပိုနေလျှင်, ကွဲပြားခြားနားဆိုပါတယ် Leonhardt et al ရဲ့ ဘာသာရေးဘာသာရပ်များသူတို့ရဲ့ nonreligious ဘာသာရပ်များထက်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအသုံးပြုသူတစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားရာခိုင်နှုန်းပါဝင်သည်, တဦးတည်းဘာသာရေးအသုံးပြုသူများကိုမကြာခဏသိသိသာသာလျော့နည်းသုံးပြီးရှိနေသော်လည်းစွဲစမ်းသပ်မှုအပေါ်ပိုမိုမြင့်မားဂိုးသွင်းဖို့မျှော်လင့်ထားလိမ့်မည်။
၏သင်တန်း, ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအသုံးပြုမှုကိုစွဲလမ်းအန္တရာယ်ဘာသာရေး porn အသုံးပြုသူများချုပ်ထားမပေးပါ။ ဤဖြစ်စဉ်တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များနှင့်ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေပေမယ့်နေဆဲရံဖန်ရံခါ bingeing နေသောလောက porn အသုံးပြုသူများအဖွင့်ပြသည်။ အဆိုပါ Point သည်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအသုံးပြုမှုဖြစ်ရပ်ဆန်းများနှင့်ညစ်ညမ်းစွဲကြိုတင်ဘာသာရေး porn အသုံးပြုသူများနှင့်ဖျော်ဖြေပွဲအတွက်ပိုမိုမြင့်မားစွဲရမှတ်သတင်းပို့ဘာဖြစ်လို့များအတွက်သာဖြစ်နိုင်သောရှင်းပြချက်အဖြစ်အရှက်ကွဲခြင်း (သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းစွဲ "ကိုရိပ်မိ") အကြောင်းကိုယူဆချက်ဆွဲခြင်းနှင့်ထုတ်ပြန်ခြင်းမှလွတ်လပ်စွာလေ့လာခဲ့ရန်လိုအပ်ပါသည်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ လျော့နည်းမကြာခဏအသုံးပြုခြင်း။
ယာနျဘာသာတရားကိုနှင့် Porn သုံးစွဲမှုအနှစ်ချုပ်:
ယာနျဘာသာတရားကို porn စွဲ (မဟုတ်ရင်ရိပ်မိသို့မဟုတ်) ကြိုတင်ခန့်မှန်းမထားဘူး။ လောကတစ်ဦးချင်းစီ၏တစ်ဦးကဝေးပိုကြီးတဲ့ရာခိုင်နှုန်း porn ကိုအသုံးပြုပါ။
ဘာသာရေးကလူတစ်ဦးသိပ်သေးငယ်ရာခိုင်နှုန်း porn ကိုအသုံးပြုဖို့ကတည်းကစျယာနျဘာသာတရားကိုကွောငျးထငျရှားဖြစ်ပါသည် ကာကွယ်ရန်ဖြစ်သော porn စွဲဆန့်ကျင်။
Grubbs နှင့် et al Leonhardt ။ "ဘာသာရေးညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများ" မှလူနည်းစုမှကောက်ယူရရှိသောနမူနာများသည်ဘာသာရေးအသုံးပြုသူများအပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားမှုရှိသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်ဘာသာရေးညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများသည်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ဆိုင်သောတူရိယာများအပေါ်ယေဘုယျရမှတ်များအနည်းငယ်ပိုများလာပြီးအသုံးပြုခြင်းကိုထိန်းချုပ်ရန်ပိုမိုခက်ခဲသည်။
porn အသုံးပြုမှုကိုမကြာခဏသို့မဟုတ် compulsive ဖြစ်လာသည်နှင့်အမျှ, ဘာသာရေး porn အသုံးပြုသူများသည်မိမိတို့အယူဝါဒကိုပြန်သွားပါ။ ဤသည်ညစ်ညမ်းစွဲစမ်းသပ်မှုအပေါ်အမြင့်မားဆုံးသွင်းယူသောသူတို့အားလည်းစျယာနျဘာသာတရားကိုအပေါ်ပိုမိုမြင့်မားဂိုးသွင်းမည်ဟုဆိုလိုသည်။
အများစုကဘာသာရေး porn အသုံးပြုသူများသည်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုအန္တရာယ်များကြောင်းသတိပေးခဲ့သည်ပါပြီ။ သူတို့ဟာထို့ကြောင့်လျော့နည်း porn ကိုအသုံးပြုကြရန်နှင့် up ပြုလုပ်ပေးခြင်းနှင့်အတူစမ်းသပ်ကြဖို့ပိုများပါတယ်။ ကအကဲဖြတ်သကဲ့သို့လုပ်နေတာသူတို့ porn စွဲ၏လက္ခဏာနှင့်ရောဂါလက္ခဏာများကိုအသိအမှတ်မပြုဖို့ပိုများပါတယ် et al Leonhardt ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာမည်မျှအသုံးပြုသည်ဖြစ်စေပစ္စည်း ၅ ခု (နှင့်အလားတူ) မေးခွန်းလွှာများ (များ) ။
ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းသောညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူများသည်အတော်လေးစွဲလမ်းနိုင်ပြီး (ဥပမာပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းသုံးစွဲသူများမဟုတ်သူများ) နှိုင်းယှဉ်လောကဘာသာရပ်များထက်မကြာခဏအသုံးပြုသော်လည်း၊ စွဲလမ်းမှုစမ်းသပ်မှုများတွင်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်မြင့်မားသည်။
အပိုင်း ၅၊ လေ့လာမှုများကမူ“ လက်ရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုအဆင့်” ကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။ မဖြစ် porn စွဲဖို့ linearly ဆက်စပ်
အဆိုပါ Grubbs လေ့လာမှုများနှင့် Leonhardt, et al။ ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းမှုကိုနာရီပေါင်းများစွာအသုံးပြုခြင်းသည်“ တကယ့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု” နှင့်အဓိပ္ပာယ်တူဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ“ စစ်မှန်သောညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု” ၏အတိုင်းအတာကိုသာမန်အသုံးပြုသောကြိမ်နှုန်းသို့မဟုတ်“ ညစ်ညမ်းစေသည့်လက္ခဏာများ” ထက်“ လက်ရှိနာရီအသုံးပြုမှု” သို့မဟုတ်“ အသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေ” ဖြင့်သာဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ စွဲကျွမ်းကျင်သူများကသဘောမတူ။
ခင်ဗျားတို့ထရပ်ကားတစ်စီးမောင်းလို့ရအောင်ဒီစာရေးသူရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုနဲ့အင်တာနက်စွဲလမ်းမှု (သုတေသန)1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) သတင်းပေးပို့ထားပါတယ် Sub-အမျိုးအစားများကိုအသုံးပြုမှုနာရီနှင့်အတူ linearly မပတျသကျဘူးအင်တာနက်စွဲလမ်း။ တကယ်တော့, 'နာရီအသုံးပြုမှု' 'variable ကို၏စွဲစိတ်မချရအတိုင်းအတာဖြစ်ပါတယ်။ ထူထောင်ထားသည့်စွဲလမ်းမှုဆန်းစစ်ခြင်းနည်းလမ်းများသည်အခြားစိတ်ချရသောအချက်များ (ဥပမာ CPUI-9 ၏ပထမအပိုင်း ၂ တွင်ဖော်ပြထားသည့်သို့မဟုတ်) Leonhardt, et al။ မေးခွန်းများကို) ။ အောက်ပါကျဘာစွဲလေ့လာမှုများစွဲ၏နာရီနှင့်လက္ခဏာများအကြားနည်းနည်းဆက်ဆံရေးဟာသတင်းပို့:
1) အင်တာနက်ပေါ်ရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအကဲခတ်: အင်တာနက်ကိုလိင်ဆိုဒ်များအလွန်အကျွံ (2011) အသုံးပြုခြင်းများအတွက်လိင်စိတ်နိုးထ Ratings အဖွဲ့နှင့်စိတ်ဓာတ်-စိတ်ရောဂါရောဂါလက္ခဏာများ၏အခန်းက္ပ
ရလဒ်များအရအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများနှင့်ဆက်နွယ်သောနေ့စဉ်အသက်တာ၌ကိုယ်တိုင်တင်ပြသည့်ပြpornနာများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအကြောင်းအရာများ၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများ၏ပြင်းထန်မှုနှင့်နေ့စဉ်ဘ ၀ တွင်အင်တာနက်လိင် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များတွင်ရှိစဉ်အသုံးပြုသည့်လိင်လုပ်ငန်းသုံးအရေအတွက်အားဖြင့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားကြောင်းဖော်ပြသည် , အင်တာနက်ကိုလိင်က်ဘ်ဆိုက်များ (တစ်နေ့လျှင်မိနစ်) ရက်နေ့တွင်ကုန်ဆုံးသည့်အချိန်သိသိသာသာကိုအင်တာနက်စွဲလမ်းမှုစမ်းသပ်ခြင်းလိင်ရမှတ်အတွက်ကှဲလှဲ၏ရှင်းပြချက်ကိုအထောက်အကူဖြစ်စေမပြုခဲ့စဉ် (IATsex) ကျွန်ုပ်တို့သည်သိပ္ပံနှင့် ဦး နှောက်ယန္တရားများအကြားအလွန်အကျွံ cybersex နှင့်ပစ္စည်းအပေါ်မှီခိုနေရသူတစ် ဦး ဦး အနေဖြင့်ထိန်းသိမ်းရန်အလားအလာကောင်းများကြားရှိအချို့သောနှိုင်းယှဉ်မှုများကိုတွေ့ရသည်။
2) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်အလုပ်မဖြစ်ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ငိုကြွေးနေသောကောင်ကလေးအထီးအတွက်ဘာစွဲ (2015) ဆုံးဖြတ်
မကြာသေးမီကတွေ့ရှိချက်များအရ CyberSex စွဲလမ်းမှု (CA) ၏ပြင်းထန်မှုနှင့်လိင်စိတ်လှုပ်ရှားနိုင်မှုအညွှန်းကိန်းများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုပြသခဲ့သည်။ လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူများကကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းသည်လိင်စိတ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့် CA လက္ခဏာများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုပြသခဲ့သည်။ ရလဒ်များသည် CA လက္ခဏာများနှင့်လိင်မှုနှိုးဆွမှုနှင့်လိင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုညွှန်ကိန်းများအကြားပြင်းထန်သောဆက်နွယ်မှုများ၊ ဘာစွဲအော့ဖ်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနဲ့အပတ်စဉ်ကျဘာအသုံးပြုမှုကိုအချိန်နှင့်ဆက်စပ်မခံခဲ့ရ။ "
3) အဘယ်အရာကိုအရေးကြီး: ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံသုံးစွဲမှုပမာဏသို့မဟုတ်အရည်အသွေး? ပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုများအတွက်ကုသမှုရှာ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အပြုအမူအချက်များ (2016)
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးအသိပညာအဆိုအရဒီလေ့လာမှု porn အသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေနှင့်ကုသမှု-ရှာကြံ (ဒီရည်ရွယ်ချက်များအတွက်စိတ်ပညာရှင်, စိတ်ရောဂါသို့မဟုတ် sexologist သွားရောက်လည်ပတ်အဖြစ်တိုင်းတာ) ပြဿနာ porn အသုံးပြုရန်၏အမှန်တကယ်အပြုအမူအကြားအသင်းအဖွဲ့များ၏ပထမဦးဆုံးတိုက်ရိုက်စာမေးပွဲဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုအတွက်အနာဂတ်မှာလေ့လာမှုများ, နှင့်ကုသမှုကြောင်းညွှန်ပြ (အစား porn အသုံးပြုမှုကိုကြိမ်နှုန်းထက်) porn အသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်သည့်အနုတ်လက္ခဏာရောဂါလက္ခဏာတွေကုသမှု၏အထင်ရှားဆုံးခန့်မှန်းကြသည်အတိုင်းဤလယ်ကွင်း, အစားက၎င်း၏မျှသာကြိမ်နှုန်း (အရေအတွက်) ထက်တစ်ဦးချင်း (အရည်အသွေးကို) ၏ဘဝအပေါ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုသက်ရောက်မှုအပေါ်ပိုပြီးအာရုံစိုက်သင့်တယ် -seeking အပြုအမူ။
PU နှင့်အပျက်သဘောလက္ခဏာတွေအကြားဆက်ဆံရေးသိသိသာသာကြီးနှင့် Non-ကုသမှုရှာဖွေသူများအကြား Self-အစီရင်ခံ, ပုဂ္ဂလဒိဋ္စျယာနျဘာသာတရားကို (အားနည်းနေ, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖျန်ဖြေခြင်း) ကကမကထပြုခဲ့။ ကုသမှု-ရှာဖွေနေသူများထဲတွင်စျယာနျဘာသာတရားကိုအနုတ်လက္ခဏာရောဂါလက္ခဏာတွေမှဆက်စပ်မဟုတ်ပါဘူး.
4) တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂ (2016) တွေထဲမှာပြဿနာကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံသုံးစွဲမှုဆန်းစစ်ပါဆက်စပ်မှု
အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုစွဲလမ်းအစီအမံအပေါ်ပိုမိုမြင့်မားရမှတ်အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏နေ့စဉ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုမကြာခဏအသုံးပြုခြင်းကိုဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည်။ သို့သျောလညျး ရလဒ်စိုးရိမ်စိတ်, စိတ်ကျရောဂါနှင့်အသက်နှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းရဲ့အညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်ရုန်းကန်မှုများ၏ပမာဏနှင့်ကြိမ်နှုန်းအကြားမျှတိုက်ရိုက်လင့်ခ်ရှိကွောငျးကိုညွှန်ပြ. မြင့်မားသောအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲရမှတ်မှသိသိသာသာဆက်စပ်အင်တာနက်ညစ်ညမ်း, ဗွီဒီယိုဂိမ်းများကိုမှစွဲလမ်းနှင့်ဖြစ်ခြင်းအထီးတစ်ခုအစောပိုင်းပထမဦးဆုံးထိတွေ့မှုလည်းပါဝင်သည်။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအချို့ကိုအပြုသဘောသက်ရောက်မှုယခင်စာပေတွင်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာအင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏အလယ်အလတ်သို့မဟုတ်ပေါ့ပေါ့အသုံးပြုမှုနှင့်အတူတိုးတက်ကြောင်းညွှန်ပြကြဘူး။
5) ဘယ်လိုအဘယ်သူကိုကပြဿနာဖြစ်ပြီး, အဘယ်ကြောင့်: အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံကိုကြည့်ရှုခြင်း, (2009)
ဒီလေ့လာမှုကကပြဿနာသည်မည်မျှ, ပြဿနာကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှု၏ပျံ့နှံ့မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးနှင့်အမည်မသိအွန်လိုင်းစစ်တမ်းကို အသုံးပြု. 84 ကောလိပ်အရွယ်ယောက်ျားလေးတစ်ဦးနမူနာအတွက်ပြဿနာအခြေခံသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များ။ ဒါဟာအကျိုးစီးပွားဒိုမိန်းပေါ် မူတည်. ပြဿနာဖြစ်ရှာတွေ့ညစ်ညမ်းရှုမြင်သူနမူနာများ၏ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 20% -60% ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ဤလေ့လာမှု၌, ကြည့်ရှု၏ပမာဏကြုံတွေ့ပြဿနာများ၏အဆင့်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းခဲ့ပါဘူး.
“ သင်သည်လက်ရှိမည်မျှစားကြသည် (အစာစား)?” ဟုမေးရုံဖြင့်စွဲလမ်းမှုတည်ရှိမှုကိုအကဲဖြတ်ရန်ကြိုးစားနေသည်ဆိုပါစို့။ သို့မဟုတ်“ လောင်းကစားကိုဘယ်လောက်ကြာကြာသုံးတာလဲ။ သို့တည်းမဟုတ်“ အရက်သောက်ခြင်း” သည်သင်မည်မျှနာရီမည်မျှသုံးစွဲမည်နည်း။ သင်ရနိုင်တယ် အလွန် အထင်မှားရလဒ်များကို။ ပို၍ အရေးကြီးသော“ လက်ရှိညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုမှု” မေးခွန်းများသည်ညစ်ညမ်းမှု၏အဓိကပြောင်းလဲနိုင်သောအကြောင်းများကိုမေးရန်ပျက်ကွက်ခြင်း - အသက်အရွယ်စတင်အသုံးပြုခြင်း၊ နှစ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုသူသည်ညစ်ညမ်းသောအမျိုးအစားများသို့တိုးပွားလာခြင်းသို့မဟုတ်မမျှော်လင့်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများပေါ်ထွက်လာခြင်း၊ အဲဒါမရှိရင်၊ တကယ့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက်နဲ့လိင်ပမာဏစသဖြင့်ပေါ့။ ထိုကဲ့သို့သောမေးခွန်းများကိုပေါင်းစပ်ခြင်းက“ လက်ရှိအသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေ / နာရီ” မျှသာမဟုတ်ဘဲညစ်ညမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အမှန်တကယ်ပြwhoနာရှိနေသည်ကိုပိုမိုသိရှိစေလိမ့်မည်။
J ကိုလိင် Res ။ 2017 မတ်လ 13: 1-12 ။ Doi: 10.1080 / 00224499.2017.1295013 ။
1 - မိသားစုဘဝကျောင်း၊ ဘရစ်ဂ်ဟမ်လူငယ်တက္ကသိုလ်။